Hababka iyo tabaha luqadaha qalaad Bogga
Tag Hababka iyo tallada luqadaha qalaad
by Tranquillus | Sep 20, 2021 | Shabakada |
Barashada in lagu bilaabo wada sheekaysiga luuqad qalaad waa erayo muhiim ah. Waxaa jira tibaaxyo badan si loo hubiyo in lagu fahmay, la fahmay oo lala galay wada hadalka qofka kale. “Ma fahmin”, “ma ku celin kartaa”, ama xitaa “maxaad taas u yeertaa” waa weedho aad u fudud in la barto taas oo haddana kaa caawin doonta inaad naftaada ku muujiso Ingiriis, Jarmal, Isbaanish, Talyaani iyo Boortaqiis Bortuqiis.
Waa maxay sababta iyo sida loo bilaabo wada sheekaysiga luqad qalaad? ^
Xaqiijinta in aad si fiican u fahantay qofka kula hadlaaya ayaa saldhig u ah hogaaminta iyo bilaabida wada hadalka luuqad qalaad. Markaad ku safrayso waddan shisheeye oo aadan si fiican ugu hadlin luuqadda, ogaanshaha erayadaani waxay dhab ahaantii noqon kartaa badbaadin nolosha xaalado badan. Aniga oo garanaya sida loo yiraahdo "ma ku celin kartaa?", "Maxaad ugu yeertaa?" ama "ma i fahantay?" run ahaantii waxay kaa caawin kartaa inaad u kala caddeyso xaaladaha qofka kale oo aad adigu fahamto.
Dabcan, ogaanshaha sida loo bilaabo wada hadalka kuma filna in lagu raaxaysto xaaladaha oo dhan. Markaa si aad u baratid erey -bixinno dheeri ah, u hagaajiso ama u hagaajiso xirfadahaaga luqad shisheeye, wax la mid ah ku -tababbarka dalabka barashada luqadda sida MosaLingua. Iyo si aad ugu sii raaxaysato dhammaan is -weydaarsiyadaada, tababar kula samee lamaane luqadeed!
Sidaa darteed waxaad ka heli doontaa ereyo iyo tibaaxaha hoose si aad u ogaato sida loo bilaabo wada sheekeysiga Ingiriis, Jarmal, Isbaanish, Talyaani iyo Boortaqiis Bortuqiis. Kaliya waxay noo tahay inaan kuu rajaynno is -weydaarsi wanaagsan!
Dheh “Waxaan ahay Faransiis” ^
Ingiriisi: Waxaan ahay Mareykan / Ingiriis
Jarmal: Ich bin Deutsche / r
Boortaqiis: Eu sou brasileiro (a)
Talyaani: Sono italiano / a
Isbaanish: Soy español (a)
Dheh “ma fahmin” ^
Ingiriis: Ma fahmin
Jarmal: Ich verstehe nicht
Boortaqiis: Não heari
Talyaani: Aan capisco / Non ho capito
Isbaanish: Ma ahan wax la yaab leh
Isagoo leh “ma i fahantay?” ^
Ingiriis: Ma i fahantay?
Jarmal: Verstehen Sie mich?
Boortaqiis: Você está me hearendo?
Talyaani: Mi capisce?
Isbaanish: enti Maxaan sameeyaa?
Dheh “Ma jiraa qof ku hadla Faransiis?” ^
Ingiriis: Ma jiraa qof ku hadla Ingiriis?
Jarmal: Spricht shalay jemand Deutsch?
Boortaqiis: Há alguém aqui que fale português?
Talyaani: C'è qualcuno che parla italiano?
Isbaanish: gu Alguien habla inglés?
Dheh “Sideed u tiraahdaa… luqadda [bartilmaameedka]?” ^
Ingiriis: Sidee baad u tiraahdaa… luqadda [bartilmaameedka]
Jarmal: Wie sagt man… auf [Zielsprache]?
Boortaqiis: Como se diz… em [idioma]
Talyaani: Kaalay si aad u ogaato… gudaha [lingua di arrivo]?
Isbaanish: Cómo se dice… en [lengua de destino]
Dheh “Maxaad taas ugu yeertaa?” ^
Af -Ingiriis: Waa maxay waxan la dhaho?
Jarmal: Wie nennen Sie das?
Boortaqiis: Como é o seu nome?
Talyaani: Kaalay bal eeg chiami questo?
Isbaanish: ó Cómo llamas a esto?
Dheh “Maxaa sameeya…?” ^
Ingiriis: Waa maxay… micnaheedu?
Jarmal: Ma heißt…?
Boortaqiis: Waa maxay macnaha…?
Talyaani: Waa maxay Che…
Isbaanish: signific Qué meaninga…?
Dheh “Si tartiib ah, fadlan” ^
Ingiriis: Miyaad hoos u dhigi kartaa, fadlan?
Jarmal: Langsamer, bitte.
Boortaqiis: Mais devagar, por favor
Talyaani: Più piano / lentamente, halkii aad jeceshahay
Isbaanish: ed Puedes hablar más despacio, por favor?
Dheh “kuma hadlo (si fiican) [luqadda bartilmaameedka]” ^
Ingiriis: Anigu kuma hadlo [luqadda bartilmaameedka] (si aad u wanaagsan)
Jarmal: Ich spreche kein / nicht so gut [Zielsprache]
Boortaqiis: Eu não falo (bem) o [idioma]
Talyaani: Non parlo (bene) [lingua di arrivo]
Isbaanish: Maya hablo [lengua destino] (muy bien)
Dheh "Waxaan ku hadlaa (wax yar) [luqad bartilmaameed]" ^
Ingiriis: Waxaan ku hadlaa (wax yar) [luqad bartilmaameed ah]
Jarmal: Ich spreche (ein bisschen) [Zielsprache]
Boortaqiis: Eu falo um pouco de [idioma]
Talyaani: Parlo (un po ') [lingua di arrivo]
Isbaanish: Hablo (un poco) [lengua de destino]
Isagoo leh “Waad iga khaldantay” ^
Ingiriis: Waxaan u malaynayaa inaad si khaldan ii fahamtay
Jarmal: Sie haben mich falsch verstanden
Boortaqiis: Você aniga si xun ayaan u maqlay
Talyaani: Lei mi ha capito lab
Isbaanish: Creo que no me maqlay
Dheh "Ma ku celin kartaa fadlan?" ^
Ingiriis: Ma ku celin kartaa intaas, fadlan? / Mar kale dheh?
Jarmal: Kannst du das bitte wiederholen?
Boortaqiis: Você pode repetir, por favor?
Talyaani: Puoi ripetere halkii aad jeceshahay?
Isbaanish: ¿Aniga waxaan ku celinayaa ku celcelin, ma ii roon tahay?
Dheh "Waxaan baranayaa [luqadda bartilmaameedka]" ^
Ingiriis: Waxaan baranayaa [luqadda bartilmaameedka]
Jarmal: Ich lerne [lZielsprache]
Boortaqiis: Estou aprendendo [idioma]
Talyaani: Sto imparando [lingua di arrivo]
Isbaanish: Estoy aprendiendo [lengua de estudio]
Hadda oo aad taqaan sida loo bilaabo wadahadalka af qalaad ^
Waa kan ! Hadda waxaad taqaanaa sida loo bilaabo wada sheekaysiga luqad shisheeye oo ku qoran 5 luqadood oo adduunka oo dhan waxtar u leh. Markaa xitaa haddii aadan doonayn inaad si fiican ugu hadasho mid ka mid ah luqadahaas, waxaad ugu yaraan ka bixi kartaa mararka qaarkood… xaalado murugsan!
Inaa sii fogaado ^
Miyaad jeclayd maqaalkani?
Si wanaagsan ayaa loo dhammeeyay akhrinta maqaalkan illaa dhammaadka. Maxaad u maleysay Fadlan qoraal noo reeb, waxay nagu dhiirrigelin doontaa inaan qoro maqaallo badan
Waad ku mahadsan tahay codkaaga
Riixid yar oo lacag ah adiga lacag kuguma fadhiyo, laakiin aad ayey muhiim noogu tahay:
Ma dooneysaa inaad isla markiiba bilowdo?
Bilaw barashada luuqad bilaash ah
Maqaalkani ma wuxuu kaa dhigayaa inaad rabto inaad barato hal ama dhowr luqadood?
Waxaan haynaa 2 war oo waaweyn… Midka koowaad: waanu ku caawin karnaa, warka labaad ee wanaagsan: waxaad bilaabi kartaa bilaash iminkana! Ku dadaal tijaabadaada bilaashka ah, kana faa'iideyso qaabkan wax ku oolka ah ee barashada luuqadaha muddo 15 maalmood ah.
Kaararka Flash -ka si aad u barato erayada, fiidyowyada nooca asalka ah oo leh cinwaan -hoosaadyo, buugaag maqal ah, qoraalo ku habboon heerkaaga: MosaLingua Premium (Web & Mobile) ayaa ku siineysa inaad hesho waxaas oo dhan, iyo wax kaloo badan! Bilow isla markiiba (waa bilaash oo aan khatar lahayn).
Waxaan bilaabaa isla markiiba
by Tranquillus | Agoosto 30, 2021 | Shabakada |
Weligaa ma dareentay inaad adigu aad u aflagaado badan tahay, qallafsan tahay ama taa lidkeeda aad u naxariis badan tahay oo maskax furnaan tahay markaad ku hadlaysid luqad kale? Waa iska caadi! Runtii, daraasado badan waxay u muuqdaan inay xaqiijinayaan in barashada luqad cusub ay beddeli karto dabeecadda qofka kale… ama naftiisa! Ilaa intee in le'eg bay barashada luuqaddu u noqon kartaa hanti horumar shakhsiyeed? Taasi waa waxa aan kuu sharxi doonno! Daraasado dhowr ah ayaa muujiyay in barashada luuqaddu ay keento isbeddel shakhsiyadeed.
Cilmi -baadhayaashu hadda waa isku mid: barashada luuqaddu waxay keenaysaa isbeddel ku yimaada shakhsiyadda bartayaasha. Daraasadihii ugu horreeyay ee mawduuca waxaa la sameeyay 60-yadii Susan Ervin-Tripp, oo ah hormuudka daraasaadka cilmi-nafsiga iyo horumarinta luqadda ee labada luuqadoodle. Susan Ervin-Trip ayaa si gaar ah u samaysay daraasadihii tijaabadii ugu horreysay dadka waaweyn ee laba luqoodlaha ah. Waxay doonaysay inay si faahfaahsan u sahamiso mala -awaalka ah in nuxurka khudbadaha laba -luqadlaha ahi is -beddelo iyadoo ku xidhan luqadda.
Sannadkii 1968-kii, Susan Ervin-Trip waxay u dooratay inay noqoto maado lagu barto haweenka jinsiyadda Japan ee ku nool San Francisco oo guursaday Ameerika. Iyaga oo ka go'ay bulshada Jabaan ee markaas degganaa Ameerika, haweenkani waxay haysteen fursado aad u yar oo ay ku hadlaan Jabaaniis. Xogwaraysiga oo ay diyaarisay Susan Ervin-Trip ayaa si gaar ah loogu soo jeediyay in la isku xidho dareen xaaladda soo socota: “marka rabitaankaygu ka duwan yahay kuwa qoyskayga, waxaan dareemayaa…”. Haddii dadka ku hadla Jabaaniyiinta ay inta badan hoosta ka xarriiqaan dareen ah “nasiib -darro weyn” ee Jabaaniis, dareenka lagu muujiyey Ingiriisiga aad buu uga duwanaa tan iyo markii uu ahaa “awood uu ku dhaqmo rabitaanka qofka” kaas oo markaas la hordhigay - tilmaan xooggan.
Isku dhac fudud? Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn: waxaan ka helnaa farqigaas fasiraadda daraasadda qowmiyadeed ee lagu sameeyay 1998 cilmi -baare Michele Koven oo ka mid ah dadka waaweyn ee reer Paris ee u soo haajiray Portugal, kaasoo ay weydiisatay inuu uga sheekeeyo waaya -aragnimada shaqsiyeed ee mid kasta oo ka mid ah luqadaha (Faransiiska iyo Bortuqiiska) . Natiijooyinka waxay muujiyeen isbeddel dabeecadeed oo muhiim ah. Sidaa darteed, haweenku waxay aad ugu janjeeraan inay fikradaha ku difaacaan sheekooyinka Faransiiska, halka ay tanaasul badan sameeyeen markay ku hadlayeen Bortuqiiska.
Sawirka Lucille Duchêne
Intaasna kuma ekaan: shaqsiyaddoodii ayaa sidoo kale la beddelay iyadoo ku xiran luqadda sheekada la adeegsaday. Michele Koven ayaa ka qaybgalayaasha ka codsatay in ay is qeexaan, had iyo jeerna labada afba. Mid iyaga ka mid ah, oo isku qeexday inay tahay "rakaab xanaaqsan" markay ku hadlaysay Faransiis, waxay dooratay inay isku tilmaamto "macmiil bangi oo niyadjabsan, edeb leh oo bukaan ah oo aan doonayn inay dareenkeeda u soo jeediso. soo -galooti ”markii ay ku hadleysay Bortuqiis.
Labadan daraasadood maxay noo sheegayaan? Way fududahay: si aad awood ugu yeelato inaad afkaaga qalaad ugu sheegto sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah, waxaa muhiim ah inaad barato oo aad isticmaasho erayo sax ah oo kala duwan. Waa sababtaas awgeed habka Babbel wuxuu ku saleysan yahay layliyo wada sheekeysi oo si habboon ula qabsan kara duruufaha waxbarasho ee kala duwan.
Maxaa dan kuu ah? Ma aha oo kaliya inay aad u fududahay in la helo waqti yar oo u gooni ah barashada luqad jadwalkaaga, laakiin mawduucyada casharrada ayaa waliba u dhigma danahaaga. Waxaa abuuray khubaro ku takhasusay luqadaha iyo luuqadaha badan, koorsooyinka Babbel waxaa loogu talagalay inay kaa caawiyaan kobcinta erayadaada iyo aqoonta luqadda si waafaqsan yoolalkaaga shaqsiyeed. Waa hab fiican oo lagu xoojiyo horumarkaaga shaqsiyeed oo lagu barwaaqoobo, miyaanay kula ahayn?
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo daraasadahaani muujinayaan natiijooyin muhiim ah, haddana waa in si taxaddar leh loo akhriyaa. Runtii, midkoodna ma tixgeliyo macnaha guud ee luuqadaha ay ku hadlaan mutadawiciintu, iyo sidoo kale farqiga u dhexeeya af kasta.
Isku dar kobcinta shaqsiga iyo barashada
Macnaha guud ee barashada luuqaddu waa lama huraan si loo fahmo aragtida laga qabo, sidaas darteedna dareenka togan ama taban ee ka dhasha. Runtii, barashada luuqad cusub inta lagu jiro safarka, inta uu ku guda jiro waxbarashadiisa ama sababo xirfadeed ma abuuri doonto aragti isku mid ah ee luqadda ee qofka wax baranaya, kaasoo aan qasab ku ahaan doonin in si la mid ah guriga looga hadlo. Tusaale ahaan, haddii luuqadda la soo rogo, waxay u badan tahay in si xun loo arko oo ay keento xannibaad.
Saxafiga Ameerikaanka Robert Lane Greene ayaa sidaas ku iftiimiyay xaqiiqda ah in dadka laba -luqadlaha ahi ay ku xiriiraan luqad shisheeye oo leh macne gaar ah iyo gaar ahaan khibradaha shucuureed ee gaarka ah inta ay nool yihiin. Xaaladahan gaarka ahi waxay saamayn ku yeeshaan dareenka la soo maray.
Waa sababtaas awgeed habka Babbel wuxuu ku saleysan yahay casharro 15-daqiiqo ah oo diiradda lagu saaray laylisyada wada-hadalka oo si habboon ula qabsan kara duruufaha waxbarasho ee kala duwan. Ma aha oo kaliya inay noqoto mid aad u fudud in lagu daro barashada luqad jadwalkaaga, laakiin mawduucyada looga hadlay casharrada ayaa u dhigma danahaaga. Faa'iido u ah horumarkaaga shaqsiyeed!
Luqadda aan ku hadalno waxay saamayn ku yeelataa aragtida adduunka
Haddii, sidaan soo aragnay, macnaha barashada uu kaalin muhiim ah leeyahay, ka warran dad horay u bartay afka? Kiiska polyglot -ka ayaa si gaar ah xiiso u leh: runtii, daraasado badan ayaa u muuqda inay muujinayaan in kan dambe uu kobcayo wax badan ama ka yar iyadoo ku xiran luqadda la adeegsaday. Daraasado dhowr ah ayaa muujinaya in qaab -dhismeedka luqaddu uu wax ka beddeli karo runtiina saamayn ku yeelan karo hab -fikirkeenna, fikirkeenna…
Wilhelm von Humboldt, oo ahaa Wasiiru Dawlaha Prussian -ka ahna aasaasihii Jaamacadda cusub ee Berlin, ayaa si gaar ah loogu yaqaanay inuu ka soo shaqeeyay mashruuc cilmi -baaris ku salaysan si loogu garto ummadaha. Luqaddu markaa waxay ahayd qodob asaas u ah tilmaanta bulshada aadanaha: sida uu qabo, afafku waxay gudbiyaan aragtida adduunka ee u gaarka ah bulsho kasta oo aadanaha ah. Wuxuu aaminsan yahay in aragtidayada adduunku ay tahay mid ka tarjumaysa afkeenna iyo dhaqankeenna. Ku hadlidda luuqad labaad ayaa markaa si dabiici ah u beddelaysa aragtidayada waxayna noo oggolaanaysaa inaan deegaankeenna ka aragno dhinac kale.
Daraasado kale, sida kuwa ku saabsan isku xirnaanta luqadda ee ay sameeyeen aqoonyahannada afafka Mareykanka Edward Sapir iyo Benjamin Lee Whorf sannadihii 50 -meeyadii, waxay muujiyeen xiriir xooggan oo u dhexeeya luqadda iyo fikirka gaarka ah ee adduunka. Sida ay iyagu qabaan, raggu waxay ku nool yihiin dhaqamadooda gaar ahaan caalamka oo dhan waxayna ku muujiyaan luuqadda lagu hadlo.
Ku barwaaqow adoo ogaanaya nooc cusub oo naftaada ah
Marka laga eego barashada luqadda, daraasadahaan kala duwan waxay u muuqdaan inay muujinayaan in ku -biiridda luqadda iyo horumarka shaqsiyeed ay isku xiran yihiin. Dhowr arrimood ayaa sharxaya dareenka ah inaad dareento “mid kale” markaad ku hadasho luqad shisheeye:
Farqiga u dhexeeya aqoonta luqadda: iyadoo ku xiran heerka aqoonta luuqadeed, waxaa suurtogal ah in si fiican loogu muujiyo maaddooyin kala duwan oo kala duwan iyo gaar ahaan in la awoodo in laga hadlo dareenka qofka ama la sameeyo kaftan iyo kaftan.
Farqiga u dhexeeya dhaqanka: af qalaad wuxuu tilmaamayaa la kulanka iyo u dhowaanshaha dhaqanka shisheeye. Marka laga hadlayo dadka laba -luqadlaha ah oo isku heer ah laba luuqadood ama ka badan, waxaa samaysma dareenno ka duwan kuwa afka hooyo.
Kala duwanaanshaha luqadda: Naxwaha iyo qaab -dhismeedka luuqaddu waa ay ku kala duwan yihiin luuqad kale, taas oo baddasha habka hadalka.
Dhammaan arrimahan kala duwan waxay saamayn ku yeeshaan shakhsiyaddeenna maxaa yeelay waxay bixiyaan suurtogalnimada in lagu fikiro luqad ka duwan afkeenna hooyo, oo lafteeda ku jirta dhaqan u gaar ah. Siyaabo badan oo kala duwan oo loo garto oo loo fasiro dunida, oo ay ugu wacan tahay in lagu dhex kobco. Marka maxaad sugeysaa inaad barato luqad cusub Babbel?
by Tranquillus | Agoosto 25, 2021 | Shabakada |
Miyaad rabtaa inaad si dhaqso leh u horumariso luuqadda aad higsanayso? Isticmaalka sawirrada maskaxda ayaa si waxtar leh kaaga caawin kara inaad gaarto yoolkaaga. Sidee habkani u shaqeeyaa? Lisa Joy, mid ka mid ah macallimiinteena Ingiriisiga ee MosaLingua oo iyadu baratay luqadda, ayaa ku siineysa afar dariiqo oo aad ku abuurto sawirro maskaxeed oo wax ku ool ah oo kaa caawin kara hagaajinta xusuustaada iyo barashada luqadda.
Adeegso sawirro maskaxeed si aad ugu hormariso luqadda aad higsanayso ^
Sideed u xasuusataa dhacdadan madaxaaga? Ma waxay ahayd qaab erayo, codad ama sawirro? Badankoodu waxay ku jawaabi doonaan sawirro. Hadday sidaas tahay, waxaad u badan tahay inaad tahay arday wax barta. Ama laga yaabee inaad heshay nooc kale oo macluumaad ah oo kiciyay xusuustaada?
Hadda oo aad fahantay waxaan ula jeedo “maskaxdeennu waxay u shaqaysaa annaga oo sawirro noo soo dirta,” aan u qaadno heerka xiga oo aan nuqul ka dhigno waxa caqliga xusuusta sameeya si ay u xusuustaan.
U samee sawirro maskaxeed oo wax ku ool ah barashada ^
Aagga barashada luqadda, waxaa jira talo kaa caawineysa inaad si dhaqso leh oo waxtar leh u barato tibaaxaha cusub. Waxay ku saabsan tahay adeegsiga sawirrada maskaxda iyadoo lala xiriirinayo iyaga. Tusaale ahaan, haddii aad u baahan tahay inaad xasuusato erayga Faransiiska “qorraxda”, waxaad sare u qaadi doontaa fursadahaaga inaad xusuusato haddii aad ereyga la xiriirto matalaad maskaxeed ee qorraxda.
Wali ma shaqeynayaa? Mar walba ma aha, maxaa yeelay waxay noqon kartaa mid aad u badan. Nasiib wanaag, abuurista sawirrada maskaxda ma aha mid aad u adag. Waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo halkan! Hubi inaad abuurto sawirro leh hal ama in ka badan afartan astaamood:
urur aan caadi ahayn
ku lug lahaanshaha dareenka
Aynu eegno mid kasta oo ka mid ah si aad si fiican u fahamto oo aad bilowdo inaad ugu dhaqdo barashada afkaaga isla markiiba.
Sawirka maskaxeed ee wanaagsan waa in la buunbuuniyaa, taas oo macnaheedu yahay inay leedahay cabbir iyo cabbir aan waafaqsanayn waxa aad caadiyan aragtid. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad xifdiso erayga “pied” oo Faransiis ah, waxaad ka fikiri kartaa nin cagtiisa mid kale aad uga dheer tahay. Ama haddii aad rabto inaad baratid erayga unghia (ciddiyaha farta ee Talyaaniga), ka soo qaad haweeney ciddiyaha ay aad u dheer yihiin inay dhulka taabtaan! Way adag tahay in la iloobo sawirrada noocan ah.
Urur aan caadi ahayn ^
Si aad u xifdiso erayga “buug”, ka fikir bisad akhrinaysa buug, ku haysa inta u dhexeysa labadiisa cagood… Tijaabi farsamadan oo u malayso sidii ciyaar. Runtii waxay noqon kartaa mid xiiso leh!
Ma ogtahay in dareenkaaga uu sii kiciyay dhaqdhaqaaq ka badan walxo go'an? Tani waa sababta sawirrada guurguura si fiican loogu duubo maskaxdaada: waxay ku adkeyneysaa inay illoobaan. Haddii ay tahay inaad xasuusato erayga coche (baabuur af Isbaanish ah), waxaa fiican inaad qiyaasto baabuur socda. Ama haddii ay tahay inaad xasuusato erayga “dhagax” af -faransiis, ka soo qaad dhagaxa rogaya.
Saameyn shucuureed ^
Dareenku wuxuu kaloo ka ciyaaraa door aad muhiim ugu ah xusuustaada. Sida laga yaabo inaad horeba u fahantay, aad bay u adag tahay in la ilaawo meelaha ku xidhan waayo -aragnimada ba'an ama la xidhiidha wakhtiyada farxadda ama murugada. Waxaan inta badan la yaabnaa inaan awoodno inaan xusuusanno faahfaahinta ugu yar ee xusuustahan, markaan ku hor mari karno isla dhismaha hortiisa jidka shaqada annaga oo aan waligeen dareemin midabkiisa ama tirada dabaqyada ay leedahay ...
Haddii aad da 'weynayd waqtigaas, waxaa laga yaabaa inaad si sax ah u xasuusato meeshaad joogtay iyo waxaad samaynaysay markii aad wax ka baratay dhacdooyinkii Sebtember 11, 2001, oo ahayd maalin aad u qiiro badan. Sidoo kale, mar kasta oo aad ku barto erayga “eyga” luqad cusub, waxaa laga yaabaa inaad la xiriirto xayawaankaaga.
Waa intaas! Eeg sida farsamooyinkani u sahlan yihiin? Waa markiina inaad abuurto sawirro maskaxeed oo wax ku ool ah! Nala wadaag qaar ka mid ah fikradahaaga faallooyinka oo noo sheeg mid ka mid ah afartan farsamood ee aad doorbidayso inaad isticmaasho.
Mid ka mid ah xusuusta ugu dambaysa in kastoo: kolba sida ay shakhsiyan u yihiin, way fududahay in la xusuusto. Ficilka aad isugu yeereyso sawir maskaxeed ayaa kaa caawin doona habka xafididda. Sawirada maskaxdu aad bay waxtar u leeyihiin haddii aad adigu samaysato. Markaa hal -abuur samee oo madadaalo!
Dhammaan talooyinka fiidiyaha ^
Waxaad ka heli kartaa dhammaan talooyinka Lisa-Joy fiidiyaha. Waxay ku qoran tahay Ingiriis, laakiin waxaa jira qoraal hoosaadyo Faransiis ah (iyo luqado kale) haddii loo baahdo. Guji giraangiraha si aad u dhaqaajiso oo waxaad sidoo kale hoos u dhigi kartaa xawaaraha qaamuuska haddii loo baahdo.
Ku biir kanaalkayaga YouTube!
Haddii maqaalkani adiga ku xiiseynayo, xor u noqo inaad sidoo kale eegto kuwan:
by Tranquillus | Agoosto 18, 2021 | Shabakada |
Da'dee ayaad ku baran kartaa luqad shisheeye? ^
Waxaa inta badan la sheegaa in carruurtu ay si sahlan u bartaan luqad. Tani macnaheedu ma tahay in dadka waayeelka ah ay dhibaato weyn kala kulmi doonaan barashada luqad shisheeye? Jawaab: maya, helitaanku si fudud buu u kala duwanaan doonaa. Sidaa darteed waayeelka waa in ay sameeyaan dadaallo kala duwan. Daraasadaha qaarkood waxay sharxaan in da'da ugu habboon ee lagu barto luuqad shisheeye ay noqon doonto marka uu yahay ilmo aad u yar, inta u dhexeysa 3 iyo 6 sano, maxaa yeelay maskaxdu waxay noqon doontaa mid soo dhaweyn badan oo dabacsan. Baarayaasha MIT (Machadka Teknolojiyadda Massachusetts) ayaa soo gunaanaday in barashada luuqaddu ay aad u adag tahay ka dib da'da 18 jir sababo dhaqan, bayooloji iyo jir ahaan. Si kastaba ha ahaatee, barashada luqad shisheeye da 'dambe waa suurtogal, waxay ku saabsan tahay gelinta dhiirigelin iyo adkaysi.
Maxaa ku dhiirrigeliya dadka waayeelka ah inay bartaan luqad shisheeye? ^
Afafka ay inta badan bartaan waayeelka ^
Sida laga soo xigtay daraasadda Ifop, 85% dadka waayeelka ah ayaa sheegaya inay awoodaan inay bartaan luqad shisheeye. Da'da dhijitaalka ah, waayeelka ayaa mas'uul ka ah ka faa'iideysiga hababkaan cusub ee barashada internetka. 91% iyaga xitaa waxay rumeysan yihiin inay tahay mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee maskax ahaan deggenaan kara. Runtii, maadaama ay hawlgab noqdeen, waayeel badan ayaa sii wata barashada waxyaabo cusub! Waxay si joogto ah u qabtaan hawlo, oo ay ku jiraan mararka qaarkood barashada luqado cusub.
Afafka ay inta badan bartaan waayeelka waxaa ka mid ah Ingiriis (45%), Isbaanish (27%), Talyaani (19%) iyo Jarmal (11%).
Markasta oo aad sii weynaato, barashada luuqaddu waxay u ekaan kartaa cabsi. Si kastaba ha ahaatee, daraasadda Ifop waxay na tusaysaa in dadka waayeelka ahi ay ka adkaysi badan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin dib-u-eegistooda marka loo eego 18-35 jirka.
Fursad lagu bilaabo ^
Waxaan weydiinay Henri, oo 75 jir ah, oo ka fariistay Saint Jean de Luz, waxa ku kallifay inuu barto Isbaanishka. Wuxuu noo sharxay inuu guri ku leeyahay Lira, Spain, halkaas oo uu ku nasto dayrta iyo jiilaalka, maxaa yeelay heerkulku wuu ka khafiifsan yahay Faransiiska. Wuxuu jeclaan lahaa inuu la sheekaysto dadka maxalliga ah oo uu is -fahmo marka uu u tago dhakhtarka ama naadiga golf -ka. Maadaama uu haysto waqti iyo dhiirigelin uu wax ku barto, wuxuu samaynayaa horumar degdeg ah. Wuxuu durbaba ku guuleystay inuu iska diiwaangeliyo naadiga golf -ka iyo ciyaartooyda buundada, dhammaan taleefanka Isbaanish! Aad buu ugu faanay inuu awoodo inuu nooga sheekeeyo tacaburkii uu la galay Mosalingua.
Jid nololeed cusub ^
Waxaa jira sababo kala duwan oo xamaasaddan luuqadaha loo qabo. Hawlgabku wuxuu sii daayaa caqabadaha xirfadeed, qaar badanina waxay helaan fursad ku habboon oo ay ku fulin karaan mashaariic muddo dheer la hayey, si ay aqoontooda u kobciyaan, u kobciyaan garaad ahaan, laakiin ma aha oo keliya. Doorashada inaad qaadato hawlgab adigoo baranaya luuqad waxay muujinaysaa rabitaan ah in dib loogu noqdo dhabaha cusub ee nolosha iyo xiriirka dunida.
Hagaajinta isgaadhsiinta dadka kugu xeeran ^
Mid ka mid ah sababaha ayaa noqon kara rabitaanka ah in la hagaajiyo mid ka mid ah isgaarsiinta, isdhaafsiga iyo xirfadaha wadaagga. Dadka qaarkood waxay rabaan inay la qabsadaan luqadda lagaga hadlo deegaanka qoyska. Halka kuwa kale ay rabaan inay bartaan luuqadda waddanka ay khusayso si ay halkaas u tagaan si ay u arkaan carruurtooda iyo kuwa ay sii dhaleen. Markaa, baadi -goobka kartida luqadda ayaa inta badan lala xiriiriyaa ku -dhaqanka dalxiiska. 63% dadka waayeelka ah ee ka jawaabay sahankii Ifop waxay tilmaamayaan inay bartaan luuqad si ay si wanaagsan ula xiriiraan inta ay safrayaan halkii ay ka ahaan lahaayeen horumarkooda shaqsiyeed (40%). Sidaa darteed waxay diyaar u yihiin inay u safraan hirarka cusub si ay u helaan tacabur waxbarasho. Runtii, waxaa aad loo mahadiyey in is -weydaarsiga si iskiis ah, iyada oo aan caqabad luuqadeed lahayn, lala yeesho dadka deegaanka. Sidaas darteed, waxaan ogaannaa in dad waayeel ah oo aad u badan ay bilaabayaan safar adduunyo kuwa kalena ay go'aansadaan inay hawlgabkooda dibadda ku qaataan.
Ku xidh xididadaada ^
Dhiirrigelinta kale ee waayeelka ah inay bartaan luuqad cusub ayaa ah rabitaanka inay ku wada hadlaan afka hooyo ee waalidkood si ay ula xiriiraan xididdada qoyskooda. Sida Simone, oo 81 jir ah, oo asal ahaan Jarmal ka soo jeedda ayeeyadeed iyo ayeeyadood, waxay jeceshahay inay dib ula xiriirto dhaqankii awoowayaasheed. Waxay xusuusataa sheekooyinkii Jarmalkii markii ay yarayd, heesaha ay baratay yaraanteedii, ka dibna tababarkii ayaa lumay. Waxay go'aansatay inay casharro ka qaadato Jaamacadda, taasoo u oggolaatay inay fahamto qaar ka mid ah heesaha xanaanada. Barashada luqadda xididdadeedu waxay ka dhigan tahay in dib loogu laabto taariikhdeedii iyo asalkeedii, laga yaabee xitaa in lala kulmo qoys cusub?
Hab lagu hayo xusuustaada da'da ^
Hawlgabku wuxuu noqon karaa tallaabo adag, taas oo ah sababta aad naftaada ugu mashquuliso barashada luuqaddu ay tahay hab wanaagsan oo lagu mashquulo. Xaaladdan, maxaad u qaadan weyday loolan cusub si aad naftaada u siiso geesinimo oo aad u kiciso ruuxa? Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee diiwaangelinta tababarka ayaa ah xaqiiqda ah inaad kicin karto oo ka shaqayn karto xusuustaada maalin kasta si loola dagaallamo gabowga maskaxda. Runtii, xusuusta ayaa aad loo adeegsadaa marka la baranayo xeerarka naxwaha, erayada ... Intaa waxaa dheer, daraasado badan ayaa muujinaya in barashada luuqad cusubi ay kor u qaadi karto awoodda garashada ee dadka waayeelka ah ayna ka fogaan karto, ama xitaa dib u dhigi karto bilowga cudurka Alzheimers.
Sidee iyo da’dee lagu baran karaa luqad shisheeye? ^
Hel taageero ku habboon ^
Waxaa jira dhowr fursadood oo lagu baran karo luqad shisheeye. Casharro shaqsiyeed ama kooxeed, tababar, luuqaddu waxay joogtaa dadka waayeelka ah ee ku jira bakhtiinta, Jaamacadaha Waqtiga Bilaashka ah ama Jaamacadaha Da'da oo dhan (UTA), ururada luqadda maxalliga ah, koorsooyinka onlaynka ah ... suurtogal. Waxa ugu weyn ayaa ah in la helo dhexdhexaadinta waxbarashada saxda ah iyada oo la raacayo rabitaankaaga iyo baahiyahaaga.
Waqti qaado si aad u abuurto jawi ku habboon waxbarashada. Waad ku mahadsan tahay internetka, waxaa jira waxyaabo badan oo la hagaajin karo. Waxaad ka heli doontaa wargeysyo, muusig, cod -baahiyeyaal, filimaan, su’aalo… wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga dhigto madadaalo intii suurtagal ah. Haddii aad ku leedahay 20 metro, 10 min qolka sugitaanka, ha ka labalabeyn inaad bilowdo dalabka barashada luqadda. Barashada luuqad cusub waxay u baahan tahay edbin iyo dhiirigelin.
Ku dhiiranow inaad hadasho! ^
Ku dhiiranow inaad hadasho, ha ka baqin inaad khaladaad gasho, maxaa yeelay intaad ku celcelisid, ayaa hormarkaagu sii badanayaa. Sidan, xiriirka bulsheed ee dadka kale ayaa la xoojin karaa, maxaa yeelay lahaanshaha lammaane “tandem” waa hab lagu sameeyo kulanno jireed iyo mid dalwad ah. Kalsoonidaada naftaada ayaa kor loo qaadi doonaa oo caqabadda luuqaddu mar dambe dhibaato ma noqon doonto.
Adeegso barnaamijyada mobilada ^
Mosalingua waxay ku bixisaa habab waxbarasho degdeg ah taleefanka, kiniiniga iyo kombiyuutarka. Si kasta oo ay tahay da'daada, meesha aad ku nooshahay ama dhiirigelintaada, waxaad had iyo jeer lahaan doontaa tababaraha luqadda qalaad ee dalwaddu si uu kuu xoojiyo. Qaabku uma baahna wax ka badan 20 daqiiqo maalintii, saddex bilood gudahoodna qof ayaa ku gaari kara heer ku filan si uu uga gudbo dalka ama u akhriyo majaladaha.
Ha ka labalabeyn mar dambe, marna ma daahdo inaad bilowdo! Laakiin ha ilaawin inaad ku raaxaysato wax walba oo ka sarreeya.
Da'dee lagu bartaa luqad shisheeye: in la sii socdo ^
Haddii mawduucan adiga xiiseeyo, waa kan maqaal kale oo aad jeclaan karto:
Bonjour Senior waa madal macluumaad iyo isbarbardhig loogu talagalay waayeelka iyo daryeelayaashooda. Waxaan ku siinnaa tusaalooyin wax ku ool ah, warar iyo xalal taageero guriga ama xarun hoy ku habboon.
by Tranquillus | Jul 15, 2021 | Shabakada |
Afka Jabbaanka, waxaa loogu yeeraa 日本 (Nihon). Ereygu wuxuu siiyay Jabbaan af Faransiis ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan door bidnay magaca Japan. Lagu tarjumay faransiis ahaan "Pays du soleil levant", waa inbadan ama kayar macnaheeda macno ahaan ee luqada wadanka. Disk A cas on asalka cad. Calaamaduhu way ka gudbaan ereyada iyo luqadda waxaana sidoo kale lagu muujiyaa calanka. Japan - ama 日本, haddaba - waa waddan loo caleemo saaray waxyaabo qarsoon. Ka mid ah xujooyinka ugu quruxda badan jasiiradaha: luuqadda Jabbaan.
Marka xagee ka yimid ereyga Japon oo Faransiis ah (iyo wax u dhigma inta badan luqadaha kale ee adduunka)? Markay badmaaxiinta Bortuqiisku ka yimaadaan badda bariga fog, waa Mandarin-ka iyaga u sii gudbiya magacyadooda jasiiradaha Japan. Waxaa loogu dhawaaqey "Jipangu", magaca dhulka mar dhow wuxuu noqdaa Japan!
Iyadoo ay wax ka bartaan 21.000 oo Faransiis ah 2018, luuqada Jabbaan ayaa aad uga dambeysa malaayiinta ardayda ah ee Ingiriisiga ama Isbaanishka. Laakiin sanadba sanadka ka dambeeya, luqadda Mishima waxay sii wadaysaa inay ka soo ifbaxdo badda Japan iyo Mount Fuji. Babbel wuxuu ku siinayaa helitaan luqadeed iyo dhaqan ee Japan!
Taariikhda luqadda Jabbaan laga soo bilaabo xilligii Yamato illaa xilligii "Cool Japan"
Qiyaastii 250, boqortooyadii ugu horreysay ayaa laga aasaasay gobolka Yamato - gobolka Nara ee hadda jira. Halka panorama maanta ay ku kala beddelayaan dhismayaasha casriga ah iyo macbudyadii qadiimiga ahaa, ka dibna ay ka bilaabmayso isbeddelka dheer ee afka Jabbaan. In yar oo diiwaanno qoran ayaa jira ka hor bilowga xilligan. Qarniyo badan, luqadda Jabbaan sidii ay u jirtay waxay ahayd dhaqan afka ah. Waa suufiyadii Buddhist ee ka yimid Shiinaha ee keena nidaamkooda garaafka jasiiradaha. Qarnigii XNUMXaad, waqtigii Nara, Jabbaanku wuxuu bilaabay inuu adeegsado fikradaha Shiinaha. Qoraallo kale ayaa markaa loo sameeyay si loo sameeyo nidaamkan isku dhafan ee caadiga ah ee Japan ee jasiiraduhu ay sii adeegsanayaan maanta.
Ma ahayn illaa xilligii Edo, inta u dhaxaysay qarniyadii 1903aad iyo XNUMXaad, in luuqadda Jabbaan si dhab ah loo qaabeeyey. Xilli kasta oo cusubi wuxuu keenaa qaybtiisa isbeddellada dhaqanka iyo luqadeed. Bilowgii qarnigii XNUMX-aad, xilligii Meiji, oo u dhigma horumarka iyo casriyeynta dalka, ayaa luuqadda ku jaangooya afka Tokyo. Sannadkii XNUMX, dawladda Japan waxay daabacday buug-gacmeed rasmi ah oo ku saabsan luqadda Jabbaan ee loogu talagalay dugsiyada.
Habka u eg inuu yahay mid u eg heerarka Talyaani ee lahjadda Florentine ama qaadashada luqadda Paris ee Kacaankii Faransiiska ka dib!
"Jabaan Jaban": markay Tokyo galeyso xilligii kawaii
Soojiidashada luuqada Jabbaan waa mid aan lagala sooci karin taas dhaqankeeda. J-Pop, manga, anime, ciyaaraha fiidiyowga, sushi and sake: oo loo yaqaan "Cool Japan", awoodda jilicsan ee Japan ayaa qaabab badan leh. Laga soo bilaabo Pikachu ilaa Hello Kitty, oo ay ku jiraan sanduuqyada bento iyo kimonos, kawaii (か わ い い), “cute” oo Faransiis ah, waa fikrad isdaba joog ah oo lagu guuleystay in laga dhoofiyo adduunka. Oo ay ku jiraan Faransiiska.
In kasta oo u janjeersada go'doomin taariikheed ee Japan, jasiiraduhu waxay muddo dheer xiriir dhow la lahaayeen Faransiiska. Astaamaha lagu sifeeyo, luuqada Faransiiska iyo dhaqanka ayaa soo jiitay jiilal Jabaan ah the ilaa ay sababaan khalkhal nafsi ah oo dhab ah! Waxay hadda yihiin 200.000 si ay u bartaan luqadda Molière. Inta udhaxeysa rinjiyeyaasha Foujita, kuugga Takeuchi iyo aasaasaha sumadda Kenzo, in badan oo reer Jabaan ah ayaa ka qayb qaatay saamaynta dhaqankooda, diwaanno aad u kala duwan, iyagoo degay Paris.
Halkeen ku hadalnaa Jabbaan maanta?
Luuqada Jabbaan hada waxaa ku hadla 130 milyan. Asal ahaan looga hadlo Japan, Jabbaan ayaa taariikh ahaan lagu aasaasay California iyo Hawaii, in kasta oo adeegsiga luqaddu u muuqdo inuu ku baaba'ayo halkaas. In ka badan 3.000 kiilomitir koonfur Honshū, jasiirad yar oo mar ay Japan qabsatay ayaa wali aqoonsanaysa Jabbaan. Tani waa Angaur, oo ka mid ah 16-ka gobol ee ka kooban Palau. Xaqiiqdii, jasiiraddan Baasifigga ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 qof oo deggan iyo aag u dhigma degmada 15-aad ee Paris, Jabbaanku wuu ku dhow yahay inuu baaba'o.
Hiragana, katakana iyo kanjis: saddexda qoraal ee lagu qoro luqadda Jabbaan
Qoraalka Jabbaanku wuxuu ku saleysan yahay astaamo dhowr ah:
Barashada Hiragana iyo Katakana (100 calaamadood oo dhan) kuma qaadaneyso wax aad uga dheer alifbeetada 'Cyrillic'. Si la mid ah nidaamka xarfaha Laatiinka, hiragana waa calaamadaha dhawaaqa ee loo adeegsado qorista ereyada Jabbaan. Isla mabda'aas, katakana waxaa loogu talagalay ereyada asal shisheeye (marka laga reebo Shiinaha). Sida kanjis, waxay ka dhaxleen luuqada Shiinaha. Calaamad waliba waxay leedahay dhawaq iyo macno u gaar ah. Haddii Jabaanku tiriyaan 50.000, "kaliya" 2.000 oo iyaga ka mid ah ayaa ku filan maalin kasta. Waxaa jira liis rasmi ah oo ka mid ah "isticmaalka caadiga ah kanjis" oo la yiraahdo jōyō kanji. Sidaa darteed, seddexdan nidaam ee shaxanka ayaa wada jira oo la wada adeegsadaa. Ma aha wax aan caadi ahayn in laga helo dhammaan saddexda Qorniinka isla xukunka.
Luuqadaha Jabbaan iyo Shiine isku qoys ma yihiin? Maya! Dhaxalka kanjis waa mid taariikhi ah. Hiddaha luqadeed kuma soo biirto ciyaarta.Mandarin waa luqad Sino-Tibetan ah, oo la xiriirta luqadaha Shiinaha. Jabbaanku waa go'doon. Si kale haddii loo dhigo, luqaddan waxay ka kooban tahay qoys go'doon ah. Aragtida afafka Altaic, oo ujeedkeedu yahay inay isu keento Jabbaan, Turki, Mongolian ama xitaa Kuuriyaan, weli dood baa ka taagan!
Luqadda Jabbaan: ma luuqad adag baa… mise wax yar baa la yaqaan?
Shiineys, Ruush, Carabi ... Reer Galbeedku waxay u muuqdaan inay u qalmaan luqado adag oo aad u qalafsan kana fog qaabka fikirkooda. Iyo luqadda Mishima ma aha mid ka reeban. Marka, luqadda Jabbaan runti ma adka in la barto learn mise wax yar baa la yaqaan?
Marka laga soo gudbo caqabadaha qoraalka iyo ereybixinta oo aan wax badan ka wadaagin afafka Indo-Yurub, luqadda Japan waxay adeegsaneysaa qaab-dhismeedka SOV (Mawduuca-Ujeedo-Verb). Jabaaniiska ayaa markaa oran doona "Waan cunaa rootiga" mana dhahayo "Waxaan cunaa rootiga" (qaab dhismeedka SVO, Mawduuc-Fal-Ujeeddo). Haddii adeegsigan u muuqdo mid caqli-gal u ah qof Faransiis ah, luqadaha SOV way ka tiro badan yihiin luqadaha SVO ee adduunka! Turkiga, Beershiya, Basque, iyo Laatiinka ayaa tusaale kale u ah luqadaha SOV. Jabaaniis ahaan, mawduuca badanaa waa laga tagayaa marka lagu sharraxo macnaha guud, ma ahan wax aan caadi ahayn in lagu dhammeeyo qaab fudud oo nooca OV ah.
SOV, SVO, VSO,…? Marka lagu daro luqadaha SOV iyo SVO oo kaligood ka kooban seddex meelood meel ka mid ah sarbeebyada adduunka, dhammaan isku-darka kale ee suurtogalka ah ayaa jira:
Luuqadaha VSO, ee nooca Verb-Ujeeddo-Ujeeddo ("cun anigu rootiga"), sida Carabiga ama Irish Gaelic; Luuqadaha VOS, ee nooca Fal-Ujeeddo-Ujeeddo ("cun rootiga I"), sida Malagasy; Luqadaha OVS, nooca Object-Verb-Subject ("rootiga aan cuno"), sida luqadaha Amerindian qaarkood; luqadaha OSV, nooca Object-Subject-Verb ("rootiga aan cuno"), aad ayey uyartahay… marka laga reebo habka loogu hadlo sifo caan ku ah Yoda Star Wars!
Si kastaba ha noqotee, bartayaasha Jabbaan waxay ku farxi karaan qaar ka mid ah wararka naxwaha wanaagsan:
🗾 Jabbaanku ma laha tiro
🗾 Jabbaanku malaha maqaallo qeexan oo aan cayimanayn
Waxyaabaha kale ee gaarka u ah Jabbaan, luqaddu ma laha ereyo u heellan oo ay ugu magacdareyso bilaha, sida Janaayo, Febraayo, Maarso, iwm. Taa bedelkeeda, Jabbaanku waxay la midoobaan kanji 月 (dayax, iyo bil aan toos ahayn) iyo tirada bisha!
Luqad fudud ama qalafsan, waa inaanan iska indhatirin muhiimadda dhiirrigelinta barashada. Luqad kastaa waxay leedahay astaamo gaar ah oo u fududeynaya ama ku adag qofka hadlaya.
by Tranquillus | Jul 14, 2021 | Shabakada |
Si loo barto Boortaqiiska, waxaa muhiim ah in diirada la saaro ku dhawaaqidiisa. Waxaad arki doontaa in ku dhawaaqida Boortaqiiska aysan ku adkaanin dadka ku hadla Faransiiska, maxaa yeelay inta badan xarfaha waxaa loogu dhawaaqaa si la mid ah tan Faransiiska! Intaas waxaa sii dheer, codad badan (dhawaaqyada xarafka ama isku dhafka xarfaha) sidoo kale waa isku mid. Dabcan, ku dhawaaqida afka Burtuqiiska way ku kala duwan tahay hadba halka aad aadeyso, laakiin hagahan ku dhawaaqida Burtuqiiska wuxuu kuu oggolaanayaa inaad is muujiso oo meel walba lagaa fahmo. Kaalay oo soo hel Bortuqiiska reer Brasil!
Ku dhawaaqida Boortaqiiska: waxaad ubaahantahay oo dhan inaad ogaato inaad sifiican uguhadasho ^
In kabadan 230 milyan oo kuhadasha luqadaha oo kuhadla luqadan ku dhowaad qaarad kasta (Aasiya, Yurub, Afrika, iyo meesha ugu badan, Ameerika), Boortaqiiska ayaa kamid ah luuqadaha loogu hadlo aduunka. Sidaas darteed waa wax dabiici ah in la barto. Sidaa darteed waxaan diiradda saari doonnaa halka loogu dhawaaqayo Burtuqiiska ee Brazil, oo ah waddanka ugu badan ee ku hadla Bortuqiiska. Laakiin ha walwelin, dadka ku hadla Boortaqiiska ee wadamada kale waxay si fiican kuu fahmi doonaan sidoo kale, haddii aad rabto inaad u safarto Portugal ama Angola tusaale ahaan.
Si aad u ogaato sida loogu dhawaaqo Boortaqiiska, waa inaad marka hore barataa xarfahaaga. Halkan, ma jiraan wax dhib ah marka la jaleeco marka hore, waxay la mid tahay tayada. 20 xaraf ayaa loogu dhawaaqaa ama waxay leeyihiin isla "dabeecad" sida faransiiska: A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, V, W , X, Y iyo Z. Xarfaha K, W, X iyo Y goor dhaweyd ayaa lagu daray alifbeetada Boortaqiiska maxaa yeelay waa xarfo inta badan loo adeegsado ereyada qalaad qaarkood.
Si aan kuugu fududeyno, weli waan arki doonnaa dhammaantood. Xaqiiqdii, haddii aad rabto inaad awood u yeelato inaad u akhrido oo / ama aad ugu dhawaaqdo ereyo af Burtuqiis ah si sax ah, waa inaad marka hore xoogga saartaa ku dhawaaqiddooda.
Ka taxaddar in kastoo! Waxa aad halkan ka heli doontaa waa xeerarka guud ahaan. Waxaa jiri kara waxyaabo ka reeban ama ku dhawaaqid ku xiran meelaha aad booqato ama cidda aad la hadasho (xitaa waddan gudahood!).
Shaqallada loogu dhawaaqo Bortuqiiska ^
Xarfaha A, I iyo O guud ahaan waxaa loogu dhawaaqaa sida Faransiiska. Waxaad ka heli doontaa ku dhawaaqida shaqallada oo dhan hoosta:
A waxaa loogu dhawaaqaa sida "a" muuska
E waxaa loogu dhawaaqaa "é" sida meta (cabsi)
Waxaa laygu dhawaaqaa sida "i" in ilha (jasiirad)
O waxaa loogu dhawaaqaa inuu yahay "o" furan, sida avó (ayeeyo), ama "o" xiran, sida porto (dekedda)
U waxaa loogu dhawaaqaa sida "ama" rua (waddo)
Y waxaa loogu dhawaaqaa sida Faransiiska "y" yoga (yoga)
Ka taxaddar in kasta oo, ay ku xigto M ama N, shaqallada ayaa u muuqda kuwo furfuran (E waxaa loogu dhawaaqi doonaa "è" tusaale ahaan) waana la nasin doonaa. Dhibaato weyn kuma lahan kuwa ku hadla Faransiiska halkaan, maxaa yeelay waxaan sidoo kale ku dhawaaqnay dhawaaqyo afkeenna ah.
Shibbaneyaal beddela codkooda ^
Sidii hore loo soo sheegay, shibbaneyaasha B, F, J, K, L, M, N, P, Q, V, W, X iyo Z guud ahaan waxaa loogu dhawaaqaa sida Faransiiska. Xarafka H sidoo kale wuu aamusan yahay, sida Faransiiska oo kale.
Si kastaba ha noqotee, xarfaha alifbeetada qaarkood waxay badali karaan dhawaqooda. Ma jiraan kuwa badan, laakiin si fiican u garashada iyaga ayaa lagama maarmaan u ah hanashada ku dhawaaqida Bortuqiiska reer Brasil. Hadda oo aan aragnay dhammaan xarfaha aan wax dhib ah ku keenayn ku dhawaaqida Boortaqiiska, waa kuwan kuwa u baahan xoogaa dadaal dheeri ah:
Xarafka C ^
Xarafka C wuxuu la socdaa dhaqan la mid ah kii Faransiiska:
Waxaa ku xiga shaqallada A, O iyo U, xarafka C waxaa loogu dhawaaqaa / k / sida kafeega (kafeega) ama casa (guri)
Waxaa ku xiga shaqallada E iyo I, xarafka C waxaa loogu dhawaaqaa / s / as in centro (xarunta)
Waxa kale oo jira xarafka Ç oo loogu dhawaaqo sida Faransiiska, xaalad kastoo jirta. Tusaale ahaan: França (France)
Xarafka D ^
Waraaqdan waxaa loogu dhawaaqaa "dj" markay raacdo xarafka I ama xarafka E markay ku jirto dhamaadka eray, sida ku jirta onde (where) ama dia (day)
Xarafka G ^
Sida xarafka C, warqadani waxay udhaqantaa sida Faransiiska oo kale:
Waxaa ku xiga shaqallada A, O iyo U, xarafka G waxaa loogu dhawaaqaa / g / sida ku taal garrafa (dhalo)
Waxaa ku xiga shaqallada E iyo I, xarafka C waxaa loogu dhawaaqaa / Ʒ / sida girafa (cirfiid)
Xarafka R ^
Bortuqiiska R (ee ka yimid Brazil) waxaa loogu dhawaaqaa seddex siyaabood oo kala duwan:
Bilowga eray, waxaa loogu dhawaaqaa sida H dhacay, sida Ingiriiska ama Jarmalka.
Dhexda ereyga badanaa waa la duudduubay, sida verde (cagaar)
Markii labanlaabmo ("RR"), waxaa loogu dhawaaqaa inuu yahay Faransiis R - carro (baabuur), ama H - cachorro (eyga) dhacay
Dhawaqyadan - marka laga reebo Faransiiska Faransiiska - maaha wax dabiici ah dadka ku hadla Faransiiska, laakiin way fududahay in lagu barto tababar yar. Marka, ha ka waaban inaad ku tababarto!
Xarafka S ^
Sida faransiiska, xarafka S wuxuu yeelan karaa dhawaaqyo kaladuwan iyadoo kuxiran booska ereyga:
bilowga erayga ama markuu labanlaabmo, waxaa loogu dhawaaqaa / s /, sidii sol (cadceed);
inta udhaxeysa laba shaqal, waxaa loogu dhawaaqaa / z /, sida casa (guri).
Xarafka T ^
Badanaa warqaddan waxaa loogu dhawaaqaa sida Faransiiska T. Si kastaba ha noqotee, Bortuqiis Barsiqi ah, xarafka T oo ay ku xigto xarafka I ama xarafka E dhamaadka ereyga waxaa loogu dhawaaqaa "tch", sida ku jirta gente (gens).
Waraaqaha ladhacay ^
Boortaqiiska, shaqallada waa la adkeyn karaa. Lahjadaha (qabriga, ba'an, baalalka leh, tilde) waxay yeelan karaan shaqooyin kala duwan iyadoo ku xiran hadalka erayga ku jira. Waxaa loo adeegsadaa, iyo waxyaabo kale, in:
kala saar laba erey oo isku higgaad ah: pode (wuu awoodaa) vs pôde (wuu kari karay)
Muuji meesha lahjadda ay ku taal marka uusan raacin qaanuunka guud: máquina (mishiin), útil (waxtar leh)
muujiyaan ku dhawaaqida koox shaqallo ah: cão (ey), mãe (hooyo)
calaamadda jarista laba shaqal oo u dhexeeya laba erey oo isku xiga: a + aquela ⇒ àquela (middaas), a + a ⇒ to (to ...)
calaamadee isbeddel yar oo ku dhawaaqida ah: pêlo (timo), pôr (in la dhigo, la dhigo)
Sidaas darteed waa muhiim in si wanaagsan loo xafido ku dhawaaqida Boortaqiiska, iyo sidoo kale higaada ereyada si aad sifiican ugubarato.
Qabriga iyo lahjadaha degdegga ah ee loogu dhawaaqayo Burtuqiiska ^
Boortaqiisku waa luqad aad u tiro badan, oo ka duwan Faransiiska, taas oo ah luqad "flatter" ah. Lahjadaha ayaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo halka lahjadda dhawaaqa la dhigay, laakiin sidoo kale in wax laga beddelo dhawaqa. Shaqalka qabrigiisa ama lahjadda degdega ah waxaa looga dhawaaqaa si furan. Tusaale ahaan, xarafka lahjadda ah ee O waxaa loogu dhawaaqaa sida O ku jirta “tufaax” (afka furan): avó (ayeeydood).
Dhawaaqa qabriga badanaa waxaa loo qoondeeyey foosha gogoldhigga a leh erayo ka bilaabmaya a-. Tusaale ahaan, halkii aan ka qori lahayn aa ama aas, waxaan qori karnaa ama ama (a la).
Lahjadda wareegsan ee loogu dhawaaqayo Bortuqiiska ^
Lahjadda wareegsan ee afka Burtuqiis waxay leedahay shaqo la mid ah tan Faransiiska: waxay wax ka beddeshaa codka shaqalka xambaarsan. Sidaa darteed dhawaaqa waxaa lagu soo saaraa afka oo yara yara xidhan.
Jilicsan ee loogu dhawaaqayo Boortaqiiska ^
Tilde waxaa loo isticmaalaa shaqallada qaarkood si wax looga beddelo dhawaqooda. Shaqalka xambaarsan ayaa markaa noqda mid hagaagsan.
Waraaqo isku dhafan oo af Burtuqiis ah ^
La mid ahaansho kale oo Faransiis ah, waxaa jira iskudhaf laba ama saddex xaraf ah oo ku dhawaaqidooda Boortaqiiska isbedelay. Waa tan sida kooxahaas waraaqaha loogu dhawaaqo Boortaqiis:
Kooxaha shibbaneyaasha ^
CH> Sida faransiiska ah, isku darka xarfaha C iyo H waxay siinayaan dhawaqa / ʃ / ee "chat", ama chamar (in la waco) Boortaqiiska
LH> Kooxdan xuruufta ah waxaa loogu dhawaaqaa / ʎ / ama sida "jirran" af Faransiis ama Isbaanish: filho (wiil)
NH> Kooxdan xarfaha ah waxaa loogu dhawaaqaa / ɲ / ama “gn”: amanhã (berri)
C> Isku darka xarafkan waxaa loogu dhawaaqaa / ks /
Kooxaha shaqalka ^
Isku-darka xarafkani wuxuu keenaa dhawaaqyada sanka, sida dhawaaqyada Faransiiska -on, -an, -in. Ku dhawaaqida Boortaqiiska ee dhawaaqyadani sidoo kale aad ayey isugu egyihiin!
>E> kooxdan xarfaha ah waxay kubilaabmaysaa dhawaqa / a /, ka dibna si dhakhso leh ayey ugu siibanaysaa dhawaqa "in": mãe (hooyo)
O> isku darka xarfaha sidoo kale wuxuu ka bilaabmayaa dhawaqa / a / wuxuuna si dhaqso leh ugu siqayaa dhawaqa "on": pão (xanuun)
ÕE> dhib badan in lagu dhawaaqo, midkani wuxuu ku bilaabmayaa dhawaqa / o / oo wuxuu si dhaqso ah ugu siqayaa dhawaqa “-ing” ee ‘dukaamaysiga’ tusaale ahaan: põe (put / pose).
Ku celceli ku dhawaaqida Boortaqiiska ^
Markaad ogaato ku dhawaaqida xarfaha, waxaa la joogaa waqtigii lagu tababbaran lahaa! Waxaad markaa bilaabi kartaa inaad:
Si aad si fiican ugu dhawaaqdo, isdejiso, daamankaaga kala bixi, ku celi ka dib maqalka maqalka ee aad si weyn u isticmaaleyso, buunbuuninna ugu dhawaaqidaada. Adiga oo qarash gareeya 5-10 daqiiqo maalintii adigoo waxan sameynaya, waxaad dhaqso u arki doontaa horumar! Xusuusnow in ujeedadu tahay in naftaada la fahmo oo aanad ugu dhawaaqin ku dhawaaqid. Markasta oo aad jimicsi yeelato, inta badan ee aad hadasho, ayaa inbadan oo aad lahjaddaada kor u qaadi doontaa! Ku hadalka af qalaad (afkooda hooyo) iyo lahjad yar ayaa inta badan ay aad ujecel yihiin dadka u dhashay.
Haddii aad ka heshay maqaalkan oo aad rabto inaad sii xoojiso aqoontaada reer Bortuqiiska reer Burtuqiis, halkan waxaa ku yaal talo soo jeedinno xiiso kuu yeelan kara:
Bilow inaad horumariso Boortaqiiskaaga
Ma rabtaa inaad horumariso Boortaqiiskaaga?
War Wanaagsan Marka Hore: Waxaan kaa caawin karnaa Labaad Warka Wanaagsan: Waxaad Bilaabi Kartaa Hadda Bilaash! Ku kici tijaabadaada bilaashka ah, oo ku raaxee habkan wax ku oolka ah ee barashada Boortaqiiska muddo 15 maalmood ah.
Kaararka tooska ah ee lagu barto ereyada, fiidiyowyada ku jira nuqul asal ah oo leh subtitles, buugaag maqal ah, qoraalo ku habboon heerkaaga: MosaLingua Premium (Web & Mobile) ayaa ku siinaya inaad waxaas oo dhan hesho, iyo inbadan! Isla markiiba bilow (waa bilaash oo khatar ma leh).
by Tranquillus | Jul 13, 2021 | Shabakada |
Barashada ku hadalka luqadda si fiican uma jecla barashada sida loo wado baaskiil: waa la ilaabi karaa. Marka sidee u ilaalin kartaa heerkaaga Ingiriisiga marka aadan inta badan fursad u helin inaad ku shaqeyso luqadda Shakespeare? Haddii aad kaligaa ku nooshahay jasiirad lama degaan ah ama magaalo weyn, waxaan soo diyaarinnay liis gaagaaban oo ah qaabab fudud oo lagula socon karo heer af Ingiriis ah… adigoon dadaal badan sameynin.
Dhammaan tilmaamahan waxay u maleynayaan inaad awood u yeelatay inaad si wanaagsan ugu hadasho Ingiriisiga waqti ka mid ah noloshaada. Taasi waa in la yiraahdo, raaxo ku filan oo aad ku fahmi karto af Ingiriisiga ku hadla oo aad ugu jawaabto isaga oo aan raadineynin ereyadaada inta lagu jiro wadahadalka, haddii ay tahay nolol maalmeedka ama mawduuc dhexdhexaad ah oo adag. Haddii aad awoodid inaad kuqorto taariikh-nololeedkaaga Ingiriis, waxaad ugu hadli kartaa Ingiriisiga si habsami leh. Tanina, xitaa haddii aadan awoodin inaad dhaafto cuntada loo yaqaan 'ratatouille' maxaa yeelay ma taqaanid magacyada Ingiriisiga ee dhammaan maaddooyinka (eggplant, zucchini, yaanyo, toon, basbaas cagaaran, basbaas cas, basbaas, cusbo, 'bouquet garni').
Halkan waxaa ku yaal liistada dhammeystiran ee dhammaan siyaabaha suurtagalka ah ee lagu ilaalin karo heerkaaga Ingiriisiga, ama xitaa si loo kobciyo ereybixintaada haddii aad sameyso dadaal aad ku raadineyso qaamuus ereyada iyo sarbeebyada ah oo aadan fahmi doonin.
1. Isku qor joornaal / joornaal / joornaal af Ingiriis ah
Markii ay galayaan waxbarashadooda qalin jabinta, ardayda Faransiiska waxaa badanaa lagula taliyaa inay ku biiraan majaladda Time. Waa fikrad fiican; laakiin waxay inta badan u janjeeraan inay iska daayaan akhriska usbuuclaha waqti la’aan, ama rabitaan la’aan. Gaar ahaan maadaama Waqtigu mararka qaar aad u adkaan karo, xitaa oomane loo akhriyi karo.
Markaa iska qor joornaal, joornaal ama xitaa joornaal fudud oo runtii kugu riyaaqaya - hadey tahay cunno, ciyaar fiidiyow ah, jardiin, dhaqaale ama cryptocurrency. Kaliya ma ahan inaad joogteyn doonto heerkaaga Ingiriisiga adigoon dadaal badan sameynin, laakiin waxaa sii dheer, waxaad ururin doontaa ereyo farsamo oo waxtar u leh noloshaada xirfadeed.
2. La shaqee inta ku hadasha Ingiriisiga sida ugu macquulsan
Si fudud ayaa loo dhahay intii la qabtay, ku dhowaanshaha dadka ku hadla Ingiriisiga shaki la’aan waa habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo heerkaaga Ingiriisiga. Waad iska diiwaangelin kartaa kulannada, ku martigelin kartaa shisheeyaha dhammaystiran Couchsurfing, waxaad ku noqon kartaa kafee kafee aagga dalxiiska, iwm.
3. Socdaal / qurbajoog / qaadasho WHV wadan ku hadla ingiriisiga
Kuwa da'doodu ka yar tahay 35 waxay ka faa'iideysan karaan Barnaamijka Fasaxa Shaqada (WHP) - xirmo heshiisyo u oggolaanaya inay dibadda aadaan si ay u safraan oo u shaqeeyaan isla waqti isku mid ah. Francophones-ka ayaa sidaas ku qaadan kara hal ama laba sano lix iyo toban dal oo kala duwan: Australia, Canada, New Zealand, iwm.
4. Ku qor xusuus qorkaaga Ingiriis
Kuwa xusuusqor sameeya (ama xusuus-qor) kaliya waa inay qoraalladooda ku qoraan Ingiriis si ay u ilaashadaan heerkooda Ingiriisiga, xitaa haddii ay tahay hal bog oo keliya bishiiba.
5. Ku qor xusuus qor, liisaska wax iibsiga iyo liisaska waxa la sameeyo ee ku qoran Ingiriis
Sida talooyinkii hore, hab aad u fudud oo aad ku ilaalin karto heerkaaga Ingiriisiga waa inaad ku qortaa dhammaan waxyaabaha maalinlaha ah ee ku saabsan luqadda Shakespeare: liisaska wax-soo-iibsiga, liisaska wax-ka-qabashada, liisaska wax-ka-qabashada, liistooyinka la sameeyo. kula socon doono dhamaadka usbuuca ama safarada, iwm. Thanks to this trick, mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho gudbinta cuntooyinka ratatouille ee adduunka oo dhan.
6. Daawasho filimaan iyo taxane Ingiriis ah si aad u ilaaliso heerkaaga Ingiriisiga
Daawashada filimada ama taxanaha noocooda asalka ah waa mid ka mid ah siyaabaha ugu caamsan ee lagu ilaaliyo heerkaaga Ingiriisiga.
7. Akhriso sheekooyin iyo qoraalo af Ingiriisi ah
Waa kuwan buugaagta qaarkood oo aan kugula talineyno inaad akhrido 2019.
8. La tasho boggaga macluumaadka ku hadla Ingiriisiga maalin kasta si aad u ilaaliso heerkaaga Ingiriisiga
Halkii aad u akhrin lahayd Le Monde maalin kasta, maxaad u barbar dhigi la'dahay akhriskaaga kuwa maalinlaha ah ee waaweyn ee ku baxa luuqadda Ingiriiska sida New York Times, Politico ama Guardian? Kaliya kuma urursan doontid eraybixin iyo hadal sarbeeb ah, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya, waxaad ku yeelan doontaa aragti ka duwan aragtida wararka marka loo eego aragtida Faransiiska iyo Faransiiska ee warbaahinta Faransiiska.
9. Dhegeyso boodhadh ama buugaag maqal ah oo Ingiriisi ah
Podcasts-ka oo dhami waa ciil, maqaalkan waxaan ku soo qaadaneynaa liistada boodhadhka ugu wanaagsan ee lagu dhegeysto Ingiriisiga.
10. Koontadaada taleefanka / kombiyuutarka / Facebook-ga ku qor Ingiriis
Beddelida luuqadda taleefankaaga, kombuyuutarkaaga, koontadaada Facebook-ga, ama ku ciyaarista fiidiyowga ee Ingiriisiga, waxay kuu oggolaaneysaa inaad kula sii xiriirto luqadda Ingiriisiga qiimo jaban. Khiyaanadan, kaligeed, si kastaba ha noqotee aad uguma filna in la ilaaliyo heerkeeda.
11. Ka dhagayso raadiyaha af ingiriisi
Fadlan la soco: tani ma ahan dhageysiga podcasts. Dhageysiga idaacadaha ku hadla Ingriisiga, tooska, internetka ama raadiyahaaga, waa hab aad wax ku ool u ah inaad ku ilaaliso heerkaaga Ingiriisiga labadaba si isdaba joog ah (maadaama aad waxyaabo kale qaban karto isla waqtigaas) iyo si firfircoon (haddii aad xoogga saareyso a ugu yaraan in la dhageysto waxa la sheegayo halkii idaacad looga dhigi lahaa dhawaq fudud oo asal ah). Haddii aadan fahmin wax walba (ama xitaa wax badan marka hore), taasi waa wax iska caadi ah. Bilaha dhexdiisa, waxaad ogaan doontaa inaad dadaal yar iyo mid kasii yarba u galayso inaad fahanto, iyo in heerkaaga Ingiriisigu uu si tartiib tartiib ah u sii fiicnaan doono!
BBC iyo Codka Mareykanka waa idaacadaha ugu caansan, laakiin waxaa jira malaayiin kale.
12. Waxaad iska qortaa kanaalka Youtube / bogagga FB / xisaabaadka Instagram & Twitter
Mawduucan, waxaad ka akhrisan kartaa maqaalkeenna kanaalada ugu wanaagsan Youtube.
13. Raadi wariye ku hadla Afka Ingiriiska
Helitaanka qalinle ama wariye ku hadla Ingiriisiga ayaa hadda aad ugu fudud internetka. Waxaa jira dhowr goobood oo khaas ah sida Penunes World ama Mylanguageexchange - laakiin haddii aad rabto qalin "dhab ah", taasi waa in la yiraahdo qof aad isku weydaarsaneyso waraaqaha dhabta ah ee warqadda lagu soo diro boostada, waa inaad beddelkeeda u jeesataa hay'adda International Pen Friends.
14. Ku martigelinta shisheeyaha Couchsurfing
Mabda 'Couchsurfing waa fududahay: ku marti geli shisheeyaha dhammaystiran guriga, illaa intaad rabto. Booqashooyinkan ayaa had iyo jeer ah fursadda la isku weydaarsado cunno, waxqabad, booqasho, daqiiqad lala yeesho dadka adduunka oo idil.
15. Caado u noqo barashada toban eray oo eray bixin ah maalintii si aad u ilaaliso heerkaaga Ingiriisiga
Caado u baahan edbin weyn, laakiin kuu oggolaaneysa inaad ilaaliso heerkaaga Ingiriisiga iyo sidoo kale inaad kobciso aqoontaada luqadda.
16. Baro gabay toddobaad kasta
Si la mid ah François Mitterand, barashada gabayga qalbigayga toddobaad kasta waa jimicsi aad u fiican oo lagu shaqeynayo xusuustaada. Ku sameynta Ingiriisiga waa caqabad xitaa aad u xiiso badan, maaddaama aayadaha aad baraneysaa ay noqon doonaan saaxiibo fikirka kaamil ah.
17. Aqri buugaagta ku hadla labada luqadood
Akhriska buugaagta Ingiriisiga waa hab wanaagsan oo lagu ilaaliyo heerkaaga Ingiriisiga. Laakiin akhrinta buugaagta lagu daabacay daabacadaha labada luuqadood ayaa xitaa ka sii wanaagsan, maxaa yeelay tarjumaaddu waxay kuu oggolaaneysaa inaad si firfircoon u tababarto fahamkaaga luqadda.
18. U qor sheekooyinka gaagaaban ee carruurta ama sheekooyinka gaagaaban ee Ingiriisiga
Haddii aad leedahay nafta qoraaga curdinka ah, qorista sheekooyinka gaagaaban ee Ingiriisiga labadaba waa baashaal weyn iyo hab wanaagsan oo lagu horumariyo Ingiriisigaaga. Ha isku mashquulin shuruudaha tayada: waxa muhiimka ah ayaa ah in la alifsado sheekooyinka, xitaa haddii ay yihiin kuwo fog ama aan indhahaagu dan ka lahayn!
19. Ku karinta Ingiriisiga
Kuwa u leh nafta kariyaha, barashada iyo naftooda buugaagta cuntada lagu qoro ee ku qoran Ingiriisiga ayaa si muuqata waxtar ugu leh ilaalinta heerka Ingiriisiga qofka.
20. Ku hees gabay Ingiriis
Ugu dambeyntiina, talada ugu fudud ee loo isticmaali karo inaad ku ilaaliso heerkaaga Ingiriisiga ayaa ah inaad heesato. Laakiin taxaddar: ma aha oo keliya su'aasha ah in heesta lagu riixo qubayska, laakiin waa in fiiro gaar ah loo yeesho erayada, la fahmo, la fasiro, la tuso. Adiga oo xafidaya heesaha, si joogto ah ugu heesaya, faham fahansan oo ku saabsan qoraalada ay qoreen farshaxan yahanada, dhib kuma lahaan doontid inaad ku haysatid Ingiriisigaaga heer heer sare ah.
by Tranquillus | Jul 5, 2021 | Shabakada |
Sidee si fiican loogu qoraa CV-gaaga Ingiriisiga? Bilowga sanad dugsiyeedka iyo bilowga sanad cusub, arday badan ayaa durba raadinaya layliyo dibedda ah, ama shaqooyin aan caadi ahayn si ay lacag uga helaan inta lagu jiro sanad farqiga ama sannadka Erasmus.
Marka halkan waxaan ka yareynaa afar iyo toban talooyin oo kaa caawin doona inaad qorto CV-ga ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee Ingiriisiga. Waxaan marka hore isbarbar dhigi doonnaa 6 kala duwanaanshaha ugu weyn ee ka dhexeyn kara CV-yada Faransiiska iyo Ingiriiska, waxaanna ku soo gabagabeyn doonnaa 8 talooyin guud oo khuseeya labada nooc.
Sidee loo qori karaa CV wanaagsan Ingiriisiga?
6-da kala duwanaansho ee ugu weyn ee u dhexeeya CV-ga Faransiiska iyo CV-ga Ingiriisiga
1. "kooban" shaqsiyeed
Tani waa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya CV-ga Faransiiska iyo CV-ga Ingiriisiga: oo kooban oo ku saabsan muuqaalka musharraxaaga, ee sadarka hordhaca ah, ee xagga sare ee CV-gaaga.
Kani waa qaybta ugu muhiimsan ee CV-gaaga Ingiriisiga, maxaa yeelay waa waxa ugu horreeya (iyo mararka qaarkood, kan kaliya) waxa qoristu akhrin doonto. Waa inaad awood u yeelatid inaad banaanka istaagto, muujiso dhiirigelintaada, naftaada ugu mashquuliso shaqada iyo kooxda, oo aad iftiimiso kartidaada ... Dhammaanba laba ama saddex weedho.
Tusaalaha shaqo bixinta oo af Ingiriis ah:
Maareeye Khibrad leh oo Mashruuc khibrad IT leh leh. Xirfadaha waxaa ka mid ah isku xirka kumbuyuutarka, fikirka gorfeynta iyo xalinta dhibaatooyinka hal abuurka ah. Awood u leh in lagu dabaqo fikradaha adeegga macaamiisha IT-ga si loo wanaajiyo khibrada isticmaale ee macaamiisha, shaqaalaha iyo maamulka.
2. Muhiimadda khibradda xirfadeed iyo shaqsiyeed
Si ka duwan Faransiiska, waddamada Anglo-Saxon waxay inta badan doorbidaan khibrad xirfadeed iyo shaqsiyeed, halkii ay ka ahaan lahaayeen shahaadooyinka jaamacadaha iyo cinwaannada.
Khibradda xirfadeed waxay markaa noqon doontaa qaybta ugu weyn ee CV-gaaga, halkaas oo aad ku faahfaahin doontid xirfaddaada qaab soo jiidasho leh, oo joogto ah. Qaybtani waa inay ku jirtaa kuwa soo socda:
Magaca shirkada aad ka shaqeysay Goobta aad ka shaqeysay Taariikhaha aad shaqeysay Doorka aad qaadatay, iyo sidoo kale cinwaanka rasmiga ah ee sharaxaadda shaqada Iyo, tan ugu muhiimsan, liis ay ku jiraan ficillo ficil ah iyo xog muhiim ah, oo lagu faahfaahinayo xirfadlaha guulaha aad ugu habboon dalabkaaga
Marka, si aad u istaagtid, waxaad ku qori kartaa xog aad u saxan natiijooyinkaaga xirfadeed: 83% kororka iibka markii aad iibineysay, qorista warqad cad, iwm. Ka taxaddar inaadan wax u dhimeyn sirta xirfadeed ee laga yaabo inaad ku soo jirtay intii aad shaqooyinkaagii hore qabatay.
3. Xirfadaha jilicsan
Waxyaabaha kale ee gaarka ah ee CV-yada Ingiriisiga ayaa ah muhiimada xirfadaha jilicsan, oo runti ah tayada aadanaha ee waxtar u leh dhowr xirfado kala duwan, sida dabacsanaan, edeb, awoodda isgaarsiinta, iwm.
Digniin: kuma filna in loo dhigo “Hoggaan” qoraha inuu kuu tixgeliyo inaad tahay hoggaamiye kooxeed. Dhammaan xirfadaha aad gelisay CV-gaaga waa inay noqdaan kuwo lagu caddeyn karo waayo-aragnimo guul leh oo la caddeeyay! Haddii aad dhahdo waxaad karti u leedahay hal-abuurnimo, fursadaha ayaa ah, inta lagu guda jiro wareysiga, shaqaaleeyaha wuxuu ku weydiin doonaa inaad xustid munaasabad aad hal-abuurnimo ku jirtay.
Xirfadaha jilicsan ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
IsgaarsiintaMaamulka Waqtiga Go'aan QaadashadaLaacad ahaanshahaSabab ku-dhiirigelinHoggaaminta Mas'uuliyaddaTaamil Xallinta Dhibaatada / Fikirka Hal-abuurkaKartida Shaqada Cadaadiska
Mawduucan, arag saddexda talo ee aad ugula hadlayso Ingiriisiga shaqada!
4. Darajooyinku muhiim maahan
Si ka duwan sida CV-ga Faransiiska, CV-ga Ingiriisiga ayaa qaybta “Waxbarashada” ka dhigi doona mid ugu dambeeya, xagga hoose ee CV-ga. Iyo, inta badan, murashaxu wuu ku qanci doonaa inuu dhigo dibloomadiisa ugu dambaysay, ama tan ugu muhiimsan. Marka kaliya dhig jaamacada aad ka qalin jabisay, iyo waliba magaca shahaadadaada ugu sareysa.
Looma baahna in la dhigo shahaadadaada jaamacadeed, liisankaaga haddii aad haysato shahaadada mastarka, sayidkaaga haddii aad haysato dhakhtar, iwm. Ilaa ay ku habboon tahay mooyee, haddii tusaale ahaan laguu tababaray laba dhinac oo is kaabaya.
5. Mareykanka gudahiisa, soo dhajinta sawir laguma talinayo.
Guud ahaan, way yartahay in sawirro baasaboor laga helo CV-yada oo Ingiriis ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay wali ku habboon tahay shaqooyinka sida waardiye ama martigeliyaha.
6. Talooyin xirfadeed
Ugu dambeyntiina, gaar ahaaneed kale ee CV-yada Ingiriisiga ayaa ah, mararka qaarkood, joogitaanka talooyin xirfadeed. Xaqiiqdii, qeybta “Khibrad”, waxaa laga yaabaa inay khuseyso in la dhigo magaca, cinwaanka iimaylka iyo lambarka taleefanka ee qofka oggolaan doona inuu caddeeyo xirfadahaaga iyo shakhsiyaddaada.
Waxay noqon kartaa maamulahaagii hore, maamulahaagii hore, borofisar jaamacadeed, tababarahaaga isboortiga, qof kasta oo ku habboon shaqadaada mustaqbalka.
Ha iloobin inaad ku wargeliso dadkaan inaad magacooda iyo xiriirkooda ku dhejisay CV-gaaga, haddii kale waxaad ku dambeyn doontaa waxyaabo lala yaabo ...
Maxaa isbeddelaya: 8 tilmaamood oo ku saabsan qorista CV-gaaga oo ku qoran Ingiriis
Maxaa isbedelaya? Wax kasta oo kale! Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka guud ee ku saabsan qorista CV wanaagsan oo Ingiriis ama Faransiis ah:
Adeegso font fududahay in la akhriyo, oo aan qurux badnayn, isla markaana aan ka hooseyn 11pt. ​​Gali gelinno ugu yaraan hal sentimitir.Hubi inaad geliso meel cad oo ku filan inta u dhexeysa qaybaha CV-gaaga kala duwan. CV leh nashqado casri ah ama qurxin. Isticmaalka midabada waa suurtagal, laakiin miyir beel yeelo Haddii aad codsiyo u dirto La Poste ama haddii aad dhiibto CV-gaaga, hubi inaad ku daabacdo warqad wanaagsan, oo leh gramage 80g / m² ah. Sidoo kale isticmaal khad tayo fiican leh, xitaa haddii ay macnaheedu tahay inaad aado madbacad xirfad leh Haddii aan si qaas ah loo codsan, ha u dirin CV-gaaga qaab PDF ah. Qorayaasha ayaa inta badan adeegsada softiweerka si ay dib ugu bilaabaan isweydaarsiga, barnaamijkaasna ma awoodo inuu sifiican u aqriyo PDF-yada.Haddi aad kujiro cilmi baaris caafimaad ama caafimaad, resumeygaagu waa inuusan ka badnaan hal ama labo bog. Ilaa aad codsaneysid jago jago sare, ku dheji kaliya hal bog oo ah dib-u-bilaabidaada. Waa muhiim in la muujiyo ruux gaar ah oo iskudhis iyo hufnaan leh.
by Tranquillus | Juun 30, 2021 | Shabakada |
Ku fikirida luuqad aan ka aheyn midda hooyo waa caqabad markii la baranayo af qalaad. Haddii aadan halkaas joogin ka hor, waxaad ogaan doontaa inaad rabto inaad u turjunto wax walba oo maskaxdaada ku jira, laga bilaabo luqadda aad higsanayso iyo luqaddaada hooyo. Tani si dhakhso leh ayey waqti u qaadan kartaa, mana aha mid aad waxtar u leh! Marka sidee uga fogaan kartaa inaad sameyso taas oo aad markaa ku kasbataa dareere iyo kalsooni? Abbe wuxuu la wadaagayaa habab wax ku ool ah oo kaa caawinaya inaad bilowdo inaad ku fikirto afkaaga bartilmaameedka ah. Waxay sidoo kale ku siin doontaa talooyin ku saabsan sida loo joojiyo turjumaadda madaxaaga.
by Tranquillus | Apr 12, 2021 | Shabakada |
Markii aan ka hadlayno luqadaha mustaqbalka, waxaan kicineynaa Shiinaha, mararka qaarkood Ruush, Isbaanish sidoo kale. Marar dhif ah oo Carabi ah, luqad badanaa aad loo ilaaway. Iyadu miyaanay ahayn, si kastaba ha noqotee, loolan adag oo cinwaanka ah? Waa mid ka mid ah 5-ta luqadood ee ugu badan adduunka. Luqadda sayniska, farshaxanka, ilbaxnimada iyo diinta, Carabigu saameyn weyn ayuu ku yeeshay dhaqamada adduunka. Sannadba sannadka ka dambeeya, iyada oo lagu aaminay dhaqamadiisa, luqadda Carabiga ayaa sii socota safarkiisa, si ay u hodanto oo ay u soo jiidato. Inta udhaxeysa Carabiga suugaanta ah, lahjadiisa aan la koobi karin iyo xarfaha aduunka laga aqoonsan karo, sidee lagu qeexi karaa nuxurka luuqadani soo baxeysa? Babbel ayaa wadada kuu dhigaya!
Aaway luqaddii Carabiga ahayd ee adduunka looga hadlay?
Carabi waa luuqada rasmiga ah ee 24 dal waana mid kamid ah 6da luuqadood ee rasmiga ah ee Qaramada Midoobay. Kuwani waa 22-ka dawladood ee Jaamacadda Carabta, oo lagu daray Ereteriya iyo Jaad. Kala badh dawladahan ku hadla Afka Carabiga waxay ku yaalliin Afrika (Algeria, Comoros, Djibouti, Egypt, Eritrea, Libya, Morocco, Mauritania, Somalia, Sudan, Chad iyo Tunisia). Qeybta kale waxay ku taalaa Aasiya (Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Syria and Yemen).
Carabi, Turki, Beershiyaan… bal aan xisaabtano! Inta badan dadka ku hadla Carabtu waa Muslimiin - Carabiguna waa luqadda Quraanka kariimka ah - iskudhafka guud waa isku qasidda afka Carabiga iyo diinta Islaamka. Wadanka muslimka ah ee ugu weyn aduunka, sikastaba, kumahadlo Carabi maadama uu yahay Indooniisiya. Carabi waa luuqad Semitig ah. Ka soo horjeedda caqiidada caanka ah, ma lahan xiriir qoys qoys Turki - kaas oo ka tirsanaan lahaa kooxda luqadda Altaic. Beershi ama Farsi, oo ah luuqada koowaad ee Iran, kuma xirna Carabiga. Waa af Indo-Yurub ah European sida Faransiiska! Sidoo kale, Afgaanistaan, labada luqadood ee ugu badan waa luuqadaha Iiraan: Dari iyo Pashto. Dhaqanka luqadda Carabiga ayaa ku jira dadka laga tirada badan yahay ee halkaas jooga, oo aad uga dambeeya Uzbek ama Turkmen. Waxaa loogu talagalay diinta iyo ganacsiga shisheeye ee Bariga Dhexe.
Markii aan joognay Babbel, waxaan caadeysanay in aan hoos u dhigno nidaamyada qorista. Xarfaha Cyrillic uma baahna wax ka badan laba maalmood oo waxbarasho ah. Dalxiiskeena Caalamiga ah ee Alphabet wuxuu horey nooga soo qaaday Caucasus ilaa Jasiiradda Kuuriya. Xagga alifbeetada carabiga… ma aha xuruuf macno ahaan ah taas oo aan ugu fahmayno xuruuf Latin ah! Xarfaha loogu yeero abjad ama xarfaha shibbane, xarfaha carabiga ayaa kaliya qoraya shibbanayaal. Waa mid qoran oo laga akhrinayo min midig ilaa bidix waxayna leedahay 28 xaraf.
Nidaamkan qoraalka waxaa lagu heli karaa luqado kale, gaar ahaan Beershiya, Kurdi iyo Urdu. Tan iyo sanadkii 1000, waxaa sidoo kale adeegsaday Uyghurs. Illaa 1928, waxay u adeegtay sidii qoraal ahaan loogu turjumay afka Turkiga oo tan iyo markii la adeegsanayay nooc ka mid ah alifbeetada Latin.
Carabi suugaaneed iyo Carabi lahjad ah
Carabi dhab ahaan waa tusaalaha ugu fiican ee diglossia. Diglossia waa xaqiiqda ah in luuqad loo qaybiyay dhowr nooc oo gobol, kuwaas oo mararka qaar aan la fahmi karin dhexdooda. Carabi ahaan, luqad ahaan, waxay tilmaami kartaa laba xaqiiqo oo kala duwan: Carabi suugaan ah oo dhinac ah, lahjad af Carabi ah oo dhinaca kale ah.
Carabi suugaaneed waa magaca loo bixiyo luuqadda jaango'an. Luqadda maamulka iyo siyaasadda, waa tan loo aqoonsan yahay inay tahay luuqadda rasmiga ah ee dalalka ku hadla Carabiga. Sidoo kale waa waxa qofku ka helo Quraanka, warbaahinta iyo naxwaha saxda ah. Waxay ku xoog badan tahay qoraalka iyo isgaarsiinta rasmiga ah, diinta iyo isweydaarsiga caalamiga ah. Laakiin xaqiiqda, qofna ma haysto Carabi soo jireen ah oo ah afkiisa hooyo. Lahjadda Carabiga waa luuqadda loo adeegsado nolol maalmeedka. Waxay qaadataa qaabab aad u kala geddisan oo ka kala socda degmo illaa gobol.
Maxaa diglossia noocan oo kale ah? Waa midhihii horumarka taariikhda, bulshada iyo siyaasadda. Sida dhammaan luuqadaha nool, Carabigu wuu is beddelaa waqti ka dib. Luqad gabay ah oo noqotay luqad diineed laga bilaabo qarnigii XNUMXaad iyo wixii ka dambeeyay, waxay qabsatay dhul aad u baaxad weyn oo leh saameyn kala duwan. Lahjadihii hore, oo aan gebi ahaanba la waayin, waxay la qabsadeen in lagu daro Carabiga. Copt-ka Masar, Berber ee Maghreb, Aramaic ee Suuriya history Taariikhda luqadda Carabiga waa taariikh tahriib iyo kobcin dhaqameed. Aynu jaleecno lahjadaha waaweyn ee Carabiga.
Maxay yihiin lahjadaha waaweyn ee Carabiga?
Farqiga u dhexeeya lahjadaha Carabiga waxaa lagu sameeyaa heerar kala duwan. Aqoonyahannada afafku waxay markii ugu horraysay doorteen gobollada. Sidaas awgeed waxaa jiri lahaa Carab Galbeed oo ka soo horjeedda Carab Bariga. Laakiin xitaa gudaha gobolladiisa, waxaa jira kala duwanaansho badan. Ilaa heer mararka qaar looga tago kala soocidda lahjadaha iyadoo loo daneynayo ereyga luqadaha.
Carabi Galbeed iyo Carabi Bariga
Carabiga Galbeedka, ama Carabiga Maghrebian, ayaa tilmaamaya kala duwanaanshaha luqadeed ee hadda jira - oo ay u kala horeeyaan xuruufta - ee Algeria, Libya, Morocco, Mauritania iyo Tunisia.
Ka jarid ahaan, dhammaan dhulalka kale ee ku hadla Carabiga waxay ku xiran yihiin Carabiga Bariga. Waxaan kala saari karnaa afarta qaybood ee luqadeed ee kala ah:
- Carabi Masaari ah;
- Carabi Mesobotaamiya, gaar ahaan Ciraaq;
- Carabi Levantine, Suuriya, Lubnaan, Falastiin iyo Urdun;
- Carab Peninsular, oo ay wadaagaan Dawladaha kale ee Carabiga ku hadla ee Jasiiradda Carabta.
Lahjadda Carabiga: tusaalooyinka qaarkood
Carabiga Aljeeriya, afka hooyo ee ku hadla afartan milyan, shaqallada qaar waxay u muuqdaan inay baaba'ayaan. Tusaale ahaan, ereyga سماء (s'ama, sky) waxaa loogu dhawaaqaa sma. Taa bedelkeeda, Carabiga Siiriyaanka ah ayaa wali aamin u ah Carabiga suugaanta ee ku dhawaaqida. Sawir kale: كيفاش؟ (kifach, sidee?), وقتاش؟ (weqtach, goorma?) iyo u janjeera in lagu daro -ach dhammaadka ereyada su'aalaha ee Carabiga Aljeeriya iyo Carabiga Marooko. Lubnaan ama Masar, gadaal waxaa loogu dhawaaqaa kif.
Waa maxay arabizi?
Caddayn in isbeddelka luqadda Carabiga ay ka fogtahay, luqad cusub ayaa soo muuqatay 1990. Waxay ku saabsan tahay Carabiga, oo loo fahmi karo inay tahay isku darka Carabiga iyo Ingiriiska (inglizi ee Carabiga) sida Frenglish, ama sida foosha ereyada carabi iyo fudeyd. Maqnaanshaha teebabka carabiga ee moobilladii ugu horreeyay ayaa horseeday in lagu beddelo xarfaha maqan lambarro. Xarafka "ء" wuxuu noqdaa 2, "ع" wuxuu noqdaa 3 ama xitaa "ح" wuxuu noqdaa 7. Dhacdo u muuqato inay baaba'ayso maanta laakiin wali laga helo shabakadaha bulshada.
by Tranquillus | Feb 16, 2021 | Shabakada |
Ma ogtahay in ku dhowaad kalabar dadka adduunka ku nool ay isu haystaan ​​inay yihiin laba-luqadle? Jaantuskan, oo umuuqda mid layaableh jaleecada hore, waxaa lagu muujiyey cilmibaaris kusaabsan labada luuqadood ee ay sameysay Ellen Bialystok, khabiir cilmu-nafsiga ah ahna borofisar Canadian ah oo katirsan jaamacada York University ee magaalada Toronto.
Ka dib markii uu qaatay dhakhtarnimadiisa 1976, takhasus gaar ah u leh garashada iyo horumarinta luqadda ee carruurta, cilmi baaristiisa waxay markaa diiradda saartay laba luuqadlaha, laga soo bilaabo carruurnimada ilaa da'da ugu sarreysa. Iyada oo su'aal dhexe ah: ku hadalka laba-luqadluhu ma saamayn ku leeyahay habka garashada? Hadday haa tahay, sidee? Kuwaani ma isku waxyeellooyin iyo / ama cawaaqibyo isku mid ah ayaa kuxiran hadday yihiin maskaxda ilmaha ama qaangaarka? Sidee carruurtu ugu noqdaan laba luqadood?
Haddii aad luqad ku baranaysid Babbel, waxaad dhab ahaan ku riyoodaa inaad awoodid inaad ka booddo dhammaan casharradaada oo, farahaaga oo si dhakhso leh u noqoto, aadna ugu hadasho laba luqadood. Nasiib darrose, taasi macquul maahan!
Si laguu cafiyo, waxaan ku siineynaa maqaalkan furayaasha qaar si aad u fahanto waxa "luqad laba-luqood" ay dhab ahaan u dhigan tahay, maxay yihiin noocyada kala duwan ee laba-luqadlayaasha iyo, laga yaabee, inay kugu dhiirrigeliyaan inaad hagaajiso wax ku oolnimada barashada afkaaga.
Maxay ka dhigan tahay ku hadalka labada luuqadood? Qofka waxaa la dhihi karaa wuxuu ku hadlayaa laba luuqadood haduu awoodo inuu kula hadlo laba luuqadood, labadaba qaab firfircoon (kuhadal, qoraal) iyo qaab dadban (dhageysi, aqrin). Si kastaba ha noqotee, ka soo horjeedka aaminsanaanta caanka ah, qof laba luuqadle ah maahan inuu ku fiicnaado labada luuqadood. Tani badanaa waxay la mid tahay carruurta laba-luqadlaha ah ee ka soo jeeda soogalootiga kuwaas oo si fudud u isticmaali doona luqadda loo isticmaalo iskuulkooda si ay uga hadlaan maadooyinka aan la taaban karin (farshaxanka, falsafada, iwm.).
Sidoo kale, in kasta oo ay jiraan noocyo laba luqoodle ah oo kala duwan, haddana waa in aan lagu khaldin awoodda ay ugu hadlaan luqad “si fiican” Barashada ku hadalka af ingriisiga ee fiican Babbel waa wax fudud: waxay u baahantahay awood inaad kula xiriirto luqadan, xitaa qaladaad yar.
5 siyaabood oo laba luqoodle u noqon kara ...
Da'da barashada afku waxay door muhiim ah ka ciyaartaa labada luuqad ee qofka. Waxaa jira shan nooc oo ah labada luuqadle:
Labada luqadood ee hore oo isku mar ah: barashada laba luuqadood laga bilaabo dhalashadii. Tani waa kiiska dadka leh laba waalid oo leh laba af hooyo oo kala duwan.
Bilowga laba luqadood oo isku xiga: qayb barashada luuqad dhalashadeed, kahor barashada luuqad labaad laga soo bilaabo carruurnimada hore. Tani waa kiiska carruurta, tusaale ahaan, ay daryeelaan qof dumar ah oo ku hadla af qalaad.
Labada luqadood ee dambe: barashada luuqad labaad laga bilaabo da'da 6, laga bilaabo afka hooyo.
Ku-darista laba-luqadlaha: ku-guuleysiga laba-luqadlaha iyada oo loo marayo koorsooyinka luqadda.
Kala-goynta laba-luqadlaha: barashada luuqad labaad si loo waxyeeleeyo tan hore.
... loogu talagalay 5 darajo oo ah laba luuqadle
Marka lagu daro shantaan siyaabood ee lagu noqdo laba-luqadle, waxaa jira shan darajo oo lagu barto laba-luqadlaha:
Labada luuqadood ee “runta ah”: aqoon fiican oo labada luuqadood ah, awood u lahaanshaha is muujinta dhammaan diiwaanada, maadooyinka oo dhan.
“Semi-linguism”: heerka aqoonta labada luqadood oo siman, xitaa haddii labada luqadood midkoodna uusan si dhab ah u aqoon. Tani waa kiiska, tusaale ahaan, carruurta barta laba luuqadood isla mar qudha.
“Equbalualism”: - ku-hadalka labada afba si isku mid ah, iyada oo aan la gaadhin heerka qof afkiisa hooyo ku hadla.
Diglossia: adeegsiga luuqad kastaa iyadoo loo adeegsanayo qaab gaar ah. Gudaha Paraguay, waa wax iska caadi ah in lala kulmo dadka ku hadla labada Guarani (oo loo isticmaalo nolol maalmeedka, qoyska, asxaabta, asxaabta ...) iyo Castilian (loo isticmaalo iskuulka, xiriirka maamulka, qaab dhismeedka rasmiga ah…). Luuqadaha gobolka sida Occitan, Basque, ama Breton sidoo kale waxay hoos imaan karaan diglossia.
Afafka dadban: fahmida luuqad adigoon awoodin inaad kuhadasho. Tani waa kiiska qoraaga sadarradan, oo si fiican u karti u leh inuu fahmo Khmer hadal ahaan isagoo aan awoodin inuu ku hadlo, akhriyo ama qoro.
Cawaaqibka ka soo baxa laba-luqadlayaasha maskaxda
Ilaa bartamihii qarnigii XNUMX-aad, laba-luqadleynta ayaa lagu eedeeyay dhammaan xumaanta: mas'uul ka ah carruurta wareersan, daahinta horumarka garashada, ka hortagga guusha waxbarashada iyo horumarka bulshada ...
Akhriso joornaalka Babbel: sida labada luuqadluhu ugu dhawaaday inuu waalanyahay!
Maanta, qof kastaa wuu oggol yahay in laba-luuqadlaha lagu hadlo uusan keenin wax saameyn ah oo taban. Iyada oo ku saleysan gaar ahaan baaritaanka Ellen Bialystok, waxaan kala saari karnaa seddex cawaaqib oo waaweyn oo wanaagsan oo ku saabsan laba-luqadlayaasha maskaxda.
Waxaa jira saddex cawaaqib oo waawayn oo muhiim ah oo ah laba-luuqadlahaha.
- Daahida astaamaha waallida iyo cudurka Alzheimers
Mid ka mid ah daraasadaha Ellen Bialystok waxay eegtay 450 qof oo qaba cudurka Alzheimers, dhammaantoodna waxay lahaayeen astaamo isku mid ah waqtiga cudurka. Kalabar nambarku wuxuu ahaa dad ku hadla laba luuqadood, iyagoo si firfircoon ugu hadla ugu yaraan laba luqadood si joogto ah noloshooda.
Cilmi baaristiisa waxay muujisay in bukaanada laba luuqadoodlaha ah ay bilaabeen inay la kulmaan astaamaha cudurka afar ilaa shan sano ka dib marka loo eego dadka keligood ku hadla. Waxay ku soo gabagabeysay in laba luuqadle noqoshada aysan ka talaalin cudurka Alzheimers, laakiin ay bixiso nasasho.
Isla safafkan, 2013 cilmi-baare Hindi ah Suvarna Alladi wuxuu daabacay daraasad ay ku lug leeyihiin 648 qof, oo muujineysa natiijooyin isku mid ah.
Sharaxaadda waxay noqon doontaa markaan sii weynaano, labada luuqadlaha ah waxay gacan ka geysan laheyd dhowrista arrinta cawl iyo caddaan, oo muhiim u ah awooddeena garashada. Intaas waxaa sii dheer, barashada luqadda, xitaa da'da weyn, waxay kordhin doontaa maadada cawlka. Markaa ma habsaan in la bilaabo barashada luqadda Babbel!
- Maskax waxtar badan
Ahaanshaha laba-luuqadle badanaa waxaa lagu sifeeyaa inay tahay luuqad joogto ah oo laba luuqadood ah. Markaad baabuur arkayso, labada luuqadood ee Franco-Spanish waxay ka fekerayaan labadaba erayga baabuur iyo erayga carro labadaba. Haddii uu la joogo Faransiis kale, wuxuu ka hadli doonaa gaari, isaga oo horjoogsanaya erayga carro, kaasoo si kastaba ha ahaatee ugu sii jiraya meel hoose oo madaxiisa ah.
Cilmi-baarista Ellen Bialystok waxay muujisay in "wareegga laba-geesoodka ah", oo ah mid la yiraahdo, wuxuu xoojinayaa nidaamka "fulinta fulinta" ee maskaxda, sida haddii labada luuqadood ay "muruq" u yihiin qaybtaan xubnaheenna.
Si la mid ah ciyaartooyga tababbaran ayaa ku guuleysan doona inuu qaado culeys ka culus qofka caadiga ah, labada luuqadlayaasha ayaa si fiican loogu tababaray inay qabtaan shaqooyin garasho gaar ah: qabashada waxyaabo dhowr ah isla waqtigaas, xallinta khilaafaadka, dhaqso uga dhaqaaqaan. mid kale, jooji ficil.
- Ahaanshaha laba luuqadle waxay kobcisaa hal-abuurka
Daraasado dhowr ah ayaa sidoo kale sheeganaya in maskaxda dadka ku hadla laba luuqadood ay ka hal-abuur badan tahay tan dadka aan luuqadaha lahayn. Daraasaddii ugu horreysay ee mowduucan waxaa lagu sameeyay magaalada Quebec sanadkii 1962, waxaana lagu soo gabagabeeyay in ku hadalka labada luuqad ay ka dhigeyso faa iido dhab ah heerka garashada, gaar ahaan xagga maskax furnaanta, hal abuurka, iyo dabacsanaanta. Habka loo isticmaalo inta lagu jiro daraasaddan si kastaba ha noqotee si joogto ah ayaa loo tartamaa: muunad aad u yar, eex dibadeed, jawi bulsho mudnaan leh, iwm.
Ugu dambeyntiina, waxaa jira cawaaqib aan fiicnayn ama aan fiicnayn, laakiin dhexdhexaad ah: Labada luuqadoodleyaasha ah ayaa qaadan doona waqti dheer si ay u doortaan ereyadooda, waxayna yeelan lahaayeen erey bixin yar. Haddii, tusaale ahaan, qof laba-luuqadle ah la waydiiyo inuu magacaabo midhaha ugu badan ee suurogal ah, waxay qaadan doontaa waqti dheer in la gaaro tirada miraha uu sheegay qof af keliya ku hadla.
Gaabiskaani laftiisa ma ahan mid taban. Xitaa waa loo arki karaa inay tahay nooc xigmad gaar ah, oo barashada luqaddu aysan ku cusbayn!
by Tranquillus | Feb 3, 2021 | Shabakada |
Iyada oo in ka badan 860 milyan oo qof ku hadla adduunka, waxaad naftaada u leedahay: maxaad mid kale u sii diiday Ma rabtaa inaad bilowdo barashada Shiinaha? Waxaan halkaan kugu siineynaa dhammaan sababaha aad ku baran karto Mandarin Shiinaha, iyo dhammaan talooyinkayaga wanaagsan si aan u bilowno waxbarashadan dheer ee quruxda badan. Sabab, sidee, iyo intee in le'eg, ayaan wax walba kuugu sharxeynaa.
Maxaad ka heli doontaa maqaalkan?
Maxaad maanta u baranaysaa Shiinaha?
Marka dabcan, Mandarin Shiineysku ma aha luqad loo aqoonsan yahay inay sahlan tahay in la barto. Xitaa waxay u taagan tahay cadaab caqabad ku ah reer Galbeedka doonaya inay bilaabaan. Cadaab cadaab ah oo wali dano badan bixisa ... Kuwa jecel caqabadaha, durba waa sabab wanaagsan oo ay ku bartaan, kuwa kale halkan waa sababo kale oo wanaagsan oo lagu barto Mandarin maanta.
Waa luqadda koowaad ee looga hadlo adduunka ^
In kabadan 860 milyan oo qof ayaa kuhadasha luuqada Shiinaha ee Mandarin. Waa luuqada ugu hadalka iyo isticmaalka badan aduunka. In badan oo aan kuu sheego inay haddaba tahay sabab wanaagsan oo loo barto: 860 milyan oo qof oo aan la xiriiro. Xaqiiqdii waxaa jira lahjadaha 24 ee Shiinaha, oo ku baahsan gobollada. Si kastaba ha noqotee, Mandarin Shiineys waxaa fahamsan inta badan dadka. Waxaa sidoo kale loo doortay luqadda rasmiga ah ee ugu horreysa Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha. Iyo inaan si sax ah u hadalno, waxaan ka hadlaynaa Mandarin Chinese halkaan, laakiin waxaan sidoo kale ka hadli karnaa Mandarin ama "Chinese Standard" (dabcan waa isku luqad!).
Faa'iido u leh arrimaha dibedda (iyo kor u qaadida CV-gaaga) ^
Shiinaha ayaa door weyn ka ciyaara dhaqaalaha adduunka. Iyo inta udhaxeysa suuqyadeeda caalamiga ah iyo tirada dadka ku hadla adduunka, waxay noqoneysaa mid xiiso leh. Barashadeeda (ha ahaato hadal afeed iyo / ama qoraal qoraal ah) hubaal inay hanti weyn ku tahay CV-ga, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga caalamiga ah, dalxiiska, ganacsiga also Waxaa sidoo kale jira imtixaan heer ah, imtixaanka HSK. xirfadlayaal. Waxay noqon kartaa himiladaada ugu horeysa inaad qaadatid imtixaankan, ka dibna aad shaqo hesho.
Ka taxaddar in kastoo, barashada Shiinaha, kaliya inaad ku darto xariiqa “Shiine: heer fiican” ee ku yaal CV-gaaga ayaan ku siin doonin dhammaan dhiirrigelinta iyo edbinta aad ugu baahan tahay inaad ku barato. Waa inaad heshaa sabab macquul ah, oo kuu oggolaan doonta inaad ku ilaaliso dhiirigelintaada heerka ugu sarreeya inta aad baraneyso. Ka shaqeynta Shiinaha, ganacsi la lahaanshaha Aasiyaanka, ku noolaanshaha qaybtan adduunka, ka shaqeynta dalxiiska Faransiiska aqoon gaar ah u leh suuqan… waa sababo wanaagsan! Barashada Shiinaha si aad khadka ugu dhigto CV-gaaga ma ahan sabab wanaagsan.
Ku baro iyada oo danta saafiga ah ee luqadda iyo dhaqanka ^
Luqadda Shiinaha waa mid hodan ah oo xiiso badan. Luqadda iyo dhaqanku waxay noqon karaan damac dhab ah. Barashada luuqadu waxay kaa caawin kartaa inaad sifiican u fahamto dhaqankan, helitaanka filimada iyo buugaagta luuqada Mandarin ee Shiineyska ah, laakiin sidoo kale waxaad sifiican u ogaan kartaa iyo qaab quus ah: cunnadiisa, daawada dhaqanka, falsafada, anshaxa shaqada, diimaha ama xitaa fanka dagaalka ... Haddii aad xiiso leh, markaa waxaad ku dhiirrigelin doontaa inaad waxbarto. Mar labaad, tani waa sabab wanaagsan iyo sabab kugu geyn doonta waxbarashada fog.
Sidoo kale, waa inaad ogaataa in sida luqado kale oo badan, ay jiraan ereyo iyo tibaaxyo badan oo ka tarjumaya dhaqanka Shiinaha. Waana wax xiiso leh in loo wajaho dhinacyadan dhaqanka Shiinaha iyada oo loo marayo qoraalkiisa.
Sidee loo barto Shiinaha maanta?
Baro Shiinaha kaligiis, kaligaa iyo khadka tooska ah ^
Qalabyo badan ayaa kuu oggolaanaya inaad keligaa barato luqad. Si aad u barato Mandarin Shiinaha sidoo kale. Hababka aan kugula talineyno adoo adeegsanaya bartayada, iyo guud ahaan dhammaan luqadaha, waxaa loo isticmaali karaa in lagu barto luqadda Confucius.
Barnaamijyada barashada luqadaha ^
Barnaamijyadu waxay bixiyaan faa'iidooyin dhowr ah oo ku saabsan barashada luqadda. Waxaa loo isticmaali karaa mobilka sidaas darteedna meel walba ayey kugula socdaan (gaadiidka, marka aad cayaartaada sameyneyso, safafka dukaamada waaweyn…). Waxay soo diraan ogeysiisyo markaad “u baahan tahay” inaad barato taas oo sii wadda waxbarashada. Ugu dambeyntiina, waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo si fudud loo isticmaali karo, wax ku ool ah oo hufan.
Codsiga lagu baranayo Mandarin ee MosaLingua wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku barato ereyada iyo weedhaha, laga soo bilaabo heerka A1 - bilowga ah - ilaa heerka C1 - horumarsan. Waxay ka badan tahay 2000 kaararka ereyada, oo leh ereyada iyo tibaaxaha ugu badan ee la isticmaalo. Faa'iidada codsigeena, ka sokow waxtarka habka, waa inay kuu saamaxdo inaad barato ereybixinta iyo ku dhawaaqiddeeda… taas oo kuu oggolaaneysa inaad si dhakhso leh ula xiriirto.
Barnaamijka Pleco ee badanaa la sheego sidoo kale waa aalad fiican. Waa qaab qaamuus badan. Waxaad ka raadin kartaa xaraf ama eray ku jira Pinyin (codbixinta codka), barnaamijkuna wuxuu ku siinayaa astaamaha, macnahiisa, ku dhawaaqidiisa, khadadka ...
Dabcan, waxaa muhiim ah in la doorto barnaamij aad ku kalsoon tahay. Codsi kuu oggolaanaya inaad horumar sameyso, oo maanka ku hayso hadafkaaga (ha ahaato inay xiriir la leedahay, qorto, safarto, shaqo ka hesho Shiinaha). Ha ka waaban inaad isbarbar dhigto barnaamijyada, hababka barashada, iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Tan awgeed, waxaad ka heli doontaa nooc bilaash ah codsigeenna MosaLingua oo aan kugula talineyno inaad bilowdo.
YouTube iyo fiidiyowyada kaalmada barashada ^
Macallimiin badan ama kuwa iskood wax u baray oo iskood wax u baray ayaa sameeyay kanaallada YouTube si ay uga caawiyaan dhiirrigelinta dhiirrigelinta badan inay wax ku bartaan fiidiyowyada Faa'iidooyinka fiidiyowyadu way badan yihiin (tiro badan, bilaash ah, shaqsiyeyn), laakiin faa'iidada ugu horreysa waxay tahay inay kuu oggolaadaan inaad barato Shiinaha / afka / maqalka / lagu hadlo! Mandarin Shiineys ah oo aad si toos ah ugu isticmaali karto inaad kula xiriirto dadka u dhashay. Haddayna isgaarsiintu tahay hadafkaaga, markaa taasi waa wax ku habboon.
Ku dhawaaqida ka dib iyo "ku hadalka", fiidiyowyada qaar ama kanaalada ayaa kicin kara mowduucyo xiiso leh oo ku saabsan barashadaada: erayada, iskuxirka, iwm. Tusaale ahaan, waxaan kugula talineynaa kanaalada:
Ha ka waaban inaad raadiso kanaallada ugu xiisaha badan uguna habboon ujeeddadaada keligaa, si fudud adoo ku qoraya barta baaritaanka ee YouTube “baro Shiinaha”.
Bogagga internetka ^
Si aad ugu sii socoto sadarka hore, ka digtoonow wixii ka baxsan kanaallada YouTube, waxaa jira barnaamijyo fiidiyoow ah oo aan kugula talineyno isla sababaha. Gaar ahaan, waad booqan kartaa boggaga Youku iyo Tudou oo ku siin doona fursad aad ku hesho ilo badan oo fiidiyow ah.
Waxaa sidoo kale jira degello badan oo aad ku baran karto luqadda, ama ugu yaraan aad uga faa’iideysan karto ilaha waxtar u leh barashadaada. Erayada, naxwaha, iskuxirka, nidaamka qoraalka, codadka, casharo kale… Waxaad kaheli doontaa waxkasta oo aad ugubaahantahay boggaga internetka. Dhibaatadu waxay tahay, ma baran doontid hal waddo, tababbarna waxaa mararka qaarkood looga baahan yahay luqadaha loo yaqaan inay adag yihiin. Markaan intaas iri, qadarkaan kheyraadka la heli karo runtii waa aalad weyn oo horay loogu socdo.
Waxaan kugula talineynaa, tusaale ahaan, Shiineyska reer Yurub (oo lagu abuuray hindisaha Midowga Yurub), Shiinaha Dhaqanka ama xitaa Chine kaas oo kulmaya casharo badan.
Baro oo ay weheliyaan macallimiin ^
Sidaan soo aragnay, internetka ayaa hada sahlaya in luuqad lagu barto kaligaa. Si kastaba ha noqotee, kuwa u baahan in la kormeero, oo lagu hago waxbarashadooda, waxaad ogaataa inaad sidoo kale baran karto Mandarin Shiineys macallin ah. Kuwani waxay noqon karaan internetka ama fool-ka-fool, koox ama casharro shakhsiyeed oo Shiine ah. Tani waa habka ugu fiican haddii aad dareento inaad u baahan tahay tababar si aad horumar u sameyso. Goobaha sida Preply ama Verbling ayaa kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysato casharro shakhsi ahaaneed oo aad la leedahay macallimiinta internetka (lacag ah) Waxaad ku socotaa xawaarahaaga sidoo kale waxaad sidoo kale ka faa'iideysaneysaa talo bixinta macallimiinta takhasuska leh. Tani waa hab wax ku ool ah, laakiin halkan faa'iido ayey leedahay.
Si aad u doorato habka iyo xalalka kugu habboon, dhammaantood waxay kuxiran yihiin ujeeddadaada waxaan dhihi lahaa. Haddii aad rabto inaad ereyada ku barato xawaarahaaga si aad u qorsheyso safar sanad gudihiis, waxaad ku bilaabi kartaa kaligaa adoo adeegsanaya app iyo ilaha laga heli karo internetka. Haddii aad u baahan tahay inaad si dhakhso leh wax u barato si aad ula kulanto himilo, erey bixin sax ah, iyo hadal wanaagsan, markaa casharrada gaarka loo leeyahay waa maalgashi wanaagsan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, inaad barato luuqada Mandarin ee Shiinaha iyo sidoo kale inaad barato luuqado badan, isku dhufashada taageerooyinka iyo qaababka ayaa kaa caawin kara Waxaad ka faa'iideysan doontaa sida ugu fiican qof walba, waxaadna ballaarin doontaa ilaha si aad u hesho aragti dhammaystiran oo ku saabsan luqadda Shiinaha iyo dhaqanka.
Mudo intee le'eg ayaa lagu baran karaa Shiinaha?
Su'aasha qof walba isweydiinayo. Kubarashada Mandarin Shiinaha farahaaga, dhammaan codadka, ku dhawaaqida saxda ah, ereyada ugu badan ee suurtogalka ah… hubaal waqti ayey qaadataa. Wadada soo socotana nooma sahlana noo Francophones. Wadada lagu barto Isbaanishka waxay umuuqataa mid aad uga fudud dhinaca!
Si kastaba ha noqotee, ogaanshaha sida loola xiriiro heer aasaasi ama heer dhexe ee Mandarin Chinese ma ahan mid cakiran, waana mid qof walba gaari karo. Laga soo bilaabo dhammaan kuwa leh dhiirigelinta, go'aaminta, iyo habab iyo qalab sax ah. Barashada Shiinaha, sida barashada luuqad kale, waxay isku halleysaa isla waqtiga go'aanka bartaha, aaladaha iyo agabyada loo adeegsaday, iyo joogteynta. Saddexda isku soo wada duub, waxaadna arki doontaa in barashadaadu si wanaagsan u socon doonto. Kadib, intee in le'eg ayay sax tahay? Wax walba waxay kuxiranyihiin hadafkaaga, waqtiga aad kusoo qaadatay barashadeeda, iyo go’aankaaga.
Ku hadal Shiinaha ^
Maxaa looga bartay Shiinaha? Si aad u wada xiriirto, ma aha? Dareenkan, markaad baraneyso luuqada Shiinaha (sida luqad kale, waxaan ula jeedaa) waa muhiim inaad xooga saarto xirfadaheeda hadalka sidoo kale. Ka taxaddar inkasta, Mandarin Shiineysku ma aha luqad loo yaqaan inay fududahay in la barto, gaar ahaan ku dhawaaqiddeeda 4-tone. Laakiin, sidaan kor ku soo sheegnay, iyadoo la adeegsanayo habka saxda ah, qalabka saxda ah ee lagu taageerayo barashadaada iyo dhiirigelintaada, ma jirto sabab aadan awoodin.
Maxay yihiin “codadka” la soosaaray? Hagaag, isla ereyga Shiinaha wuxuu yeelan karaa 4 macno haddii si kale loogu dhawaaqo. Tusaalaha ugu fiican ayaa ah: mā (= hooyo), má (= hemp), mǎ (= faras) iyo mà (= cay). Laba xaraf, 4 erey oo kala duwan, 4 codad kala duwan. Si lama filaan ah, 1. waa run in barashada iyo ku hadalka Shiinaha ay cabsi gelin karto, laakiin 2. waxaan sidoo kale garwaaqsan nahay muhiimadda ku dhawaaqidda wanaagsan ama halkaan, codka saxda ah. Waxay muhiim u tahay isgaarsiinta Shiinaha.
Iyo macnaha guud ^
Dhawaaqa ayaa hubaal ah mid lama huraan ah, laakiin ma aha kan keliya ee farriin la gaarsiinayo. Macnaha guud ayaa sidoo kale aad muhiim u ah. Waxaan kor ku soo sheegay Isbaanishka, laakiin dareenkan Isbaanishka iyo Mandarin Shiinaha waa (waxyar) waa isku mid. Xaqiiqdii, Isbaanishka, mawduuca magac uyaal shaqsiyadeed looma adeegsan: kuma dhihi doono waan cunay, waad cuntaa, isagu wuu cunaa… Waxaan dhihi doonnaa "cun, cun, cun". Tani waa macnaha noo oggolaanaya inaan fahanno cidda aan ka hadlayno (iyo dhammaadka falka). Shiineeska halkan jooga, waa wax isku mid ah: waa macnaha noo ogolaanaya inaan fahano waxyaabo badan oo jumlada ah. Ma garanaysid haddii “ma” aad maqashay uu tilmaamayo faras ama hooyo? Hagaag, naftaada ka caawi macnaha guud. Sidoo kale, miyaadan hubin sida loo isticmaalo codadka Mandarin Shiinaha? Ha welwelin, macnaha guud ayaa shaki la'aan u oggolaan doona wada-hadalkaaga inuu ogaado waxa ku saabsan.
Qalabka kaa caawinaya inaad ku hadasho Shiinaha ^
Si aad uga shaqeysid ku dhawaaqidaada, codadkaaga iyo isgaarsiintaada, waxaad isticmaali kartaa qalab kala duwan. Xitaa haddii aad bilowdo barashadan kaligaa.
Waxa jira goobo isku xidha oo xooga saara duubabka codka ee kuu oggolaanaya inaad dhegeysato dhawaaqyada saxda ah iyo dhawaaqyada. Waxaan si gaar ah ula jeedaa forvo. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad erey kuqortid pinyin (codbixinta codbixinta, iyo jilayaasha Latin) ama jilayaasha Shiinaha si aad udhageysato cajalado ay duubeen dadka udhashay goobta.
Barnaamijkeenna barashada Shiinaha ayaa ku siinaya ereyo eray bixin ah, iyo ku dhawaaqidooda oo uu duubay af-hooyo ku hadla. Waxaad dhageysaneysaa eray leh dhawaaq sax ah iyo ku dhawaaqis sax ah.
Khabiir khaas ah ka sokow, ogow inaad fursad u leedahay inaad la kulanto la-hawlgalayaasha qadka tooska ah ee aad la sheekaysan karto. Dadka asaliga ah ee raba inay bartaan faransiiska tusaale ahaan oo aad la sheekeysan karto wax yar oo ku saabsan Mandarin Shiinaha iyo in yar oo Faransiis ah. Waxaan ka hadlaynaa is-weydaarsiga luqadda, waana wax aad u xiiso badan in laga shaqeeyo muujinta afkaaga oo luqad ah. Ha moogaanin maqaalkeenna si aad u hesho wariye Shiine ah.
Qoraalka Shiinaha ^
Waxaan badanaaba maqalnaa, si fudud, Mandarin Shiineys ah kuma lug laha isugeyn, hoos u dhigid ama dhibaatooyin kale oo noocan ah. Waa run, laakiin iska jir: luqaddu waxoogaa dhibaatooyin ah ayey leedahay. Nidaamka qorista ayaa ka mid ah iyaga, waxayna u taagan tahay cadaab caqabad ku ah francophone-ka. Marka hore waa inaad ogaataa in Mandarin Shiineysku uusan dhab ahaantii lahayn xarfo. Erey kasta waxaa sameysma hal ama dhowr xaraf oo aan ugu yeerno sinogram (oo aan u tixgelin karno dhaqankeena sawir ahaan). Marka waa inaannaan baran xarfaha, laakiin halkii aan ka baran lahayn astaamahan. Nasiib wanaagse, waxaa mar kale jira aalado badan oo la heli karo oo kaa caawin kara inaad ku tababarto qaybtan luqadda ah, inaad keligaa wax ku baraneyso iyo in kale.
Qalabka kaa caawinaya inaad barato qorista Shiinaha ^
Sida ereyada barashada, waxaa jira barnaamijyo aad ku baran karto jilayaasha. Ama durba, si aad ugu baratid nidaamkan qorista cusub… Jaleecada hore, astaamahan waxay umuuqdaan kuwo aad u adag. Intaa waxaa dheer, waa inaad barataa macnaha laakiin sidoo kale ku dhawaaqida, oo aad garataa oo qortaa. Ma fududa.
Si kastaba ha noqotee, qalab badan ayaa kuu oggolaanaya inaad la kulanto dhibaatadan.
Barnaamijka Skritter (af Ingiriis) dhowr jeer ayaa nalagula taliyay. Kani waa barnaamij adeegsada, sida MosaLingua, nidaamka soo noqnoqodka oo dheereeya si uu kaaga caawiyo inaad barato jilayaasha, aqoonsato, ku dhawaaqdo oo aad qorto.
Chineasy waa barnaamij kale oo isku xiraya sawir qaadista iyo sinogram si ay ugu shaqeyso xusuustaada muuqaalka ah, iyo inay kaa caawiso inaad barato jilayaasha.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa barnaamijyo kale adoo ku qoraya "qoraalka Shiinaha" ama "qoraalka Shiinaha" iTunes ama Google Play.
Mar labaad, goobta dhaqanka Chine waa mid hodan ku ah khayraadka, aaladaha iyo layliyo kaa caawinaya inaad barato luqadda. Sidaa darteed, waxaad ka heli doontaa casharo dhowr ah oo udub dhexaad u ah qorista Shiinaha. Sidan oo kale, waxaa jira degello badan oo kaa caawinaya inaad si fiican u fahamto ka dibna aad ugu celceliso qorista Shiinaha.
Bogga Chine Nouvelle, tusaale ahaan, wuxuu bixiyaa xaashiyo (bilaash ah) oo leh sharaxaad ku saabsan jilayaasha, oo ku tusaya sida ugu habboon ee loo isticmaalo.
Ka taxaddar in kastoo, xitaa haddii barashada qorista Shiinaha ay muhiim tahay oo xiiso leh, barashadaadu waa inaysan ku koobnaan intaas. Waxaan ku celcelineynaa: xiriirka afka waa mid aad muhiim u ah wada xiriirka. Ha diirada saarin ereyga qoran, laakiin hel isku dheelitirka saxda ah ee qoraalka iyo afka.
Taasi waa tan barashada Mandarin Shiinaha. Dabcan, waxaad kaheli doontaa mowduucyo kusaabsan barashada Shiinaha oo laga yaabo inaad xiisayso bartayada. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato qeybta Shiinaha ee bartayada. Ugu dambeyntii, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad fiiriso boggeena kheyraadka ee barashada Shiinaha. Ha ka waaban inaad na weydiiso dhammaan su'aalahaaga halkan! Waa hagaag in loo akhriyo maqaalkan illaa dhammaadka. Maxaad u maleysay Fadlan qoraal noo reeb, waxay nagu dhiirrigelin doontaa inaan qoro maqaallo badan
5 / 5 (1 code)
Ma jeceshahay maqaalkan Ku biir naadiga MosaLingua bilaash
In ka badan 3 MILYAN ayaa ka faa’iideysanaya, maxaa diidaya adiga? Waa 100% bilaash:
Ku bilow barashadaada luqadda Mandarin ee Shiinaha
Ma rabtaa inaad barato Mandarin Chinese?
War Wanaagsan Marka Hore: Waxaan kaa Caawin karnaa Labaad Warka Wanaagsan: Waxaad Bilaabi Kartaa Hadda Bilaash! Ku dadaal tijaabadaada bilaashka ah kana faa'iideyso qaabkan wax ku oolka ah ee barashada Mandarin Shiinaha illaa 15 maalmood.
Kaararka tooska ah ee lagu barto ereyada, fiidiyowyada ku jira nuqul asal ah oo leh subtitles, buugaag maqal ah, qoraalo ku habboon heerkaaga: MosaLingua Web ayaa ku siineysa inaad waxaas oo dhan hesho, iyo inbadan oo dheeri ah! Isla markiiba bilaw (waa bilaash oo khatar ma leh).
Mawduucyada laga yaabo inaad xiiseyneyso: